Mateo Chitsauko 24 inonzwisiswa muzvirevo zvekuna Zvakazarurwa chaputa 6
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Mateo Chitsauko 24 inonzwisiswa muzvirevo zvekuna Zvakazarurwa chaputa 6
Mateo Chitsauko 24 inonzwisiswa muzvirevo zvekuna Zvakazarurwa chaputa 6
Mavhesi 7 ekutanga aZvakazarurwa chitsauko 6 anozivisa hondo dzemweya dzanga dzichiitika mumakore 2 000 enguva dzemakereke manomwe echiKristu.
Vhesi 8 inoburitsa pachena muitikiro mutsva wezvinhu, nguva yeKutambudzika kukuru. Izvi ndizvo zvatinofanira kupunyuka kubva kwazviri.
Mweya waMwari unozviratidza sezvisikwa zvipenyu zvina (masimba) kana zvipuka zvinorarama. Chipenyu chimwe nechimwe chinomiririra hunhu hwakashandiswa naMwari kutungamirira kereke munguva ina dzakasiyana apo Mwari aipikisa shanduko uye mweya waikura wehunyengeri uye unorasisa waAntikristu uyo unoburitswa semutasvi webhiza.
Uyu ndiye mutasvi webhiza umwechete akakurudzira farao kuti apikise Mosesi.
EKSODO 15:1 Zvino Mosesi navana vaIsirari vakaimbira Jehova rwiyo urwu, vakataura vachiti, Ndichaimbira Jehova, nokuti akasimuka nesimba rake; akakandira bhiza nemutasvi waro mugungwa.
Bhiza nemutasvi waro zvinomiririra mweya waAntikristu uyo akakurudzira Farao kuti asateerere Izwi raMwari (uye kuti aedze kuuraya nekuita varanda avo vairitevera) asi Mweya waMwari waikurudzira Mosesi kuteerera nekutenda mushoko rake uyezve akanyora maBhuku mashanu ekutanga eBhaibheri.
Tinofanira kugara tichiziva kuti kune hondo dzemweya dziri kutoitika. Farao aingova munhu aimiririra Satani.
MAPISAREMA 136:15 Akawisira Farao nehondo yake mugungwa dzvuku; nokuti Ngoni dzake dzinogara nekusingaperi.
Zvese zvaitaridzika sezvakanaka. Vana veIjipita vaive vafa asi wakaipa aivashandisa aive asina.
Pamberi Johani akazoratidzwa wakaipa uyu achinyengera achisimuka kubva mugungwa.
ZVAKAZARURWA 13:1 zvino ndakaona chikara chichisimuka chichibva mugungwa,chiine nyanga dzine gumi nemisoro minomwe; napamusoro penyanga dzacho pakanga pane korona dzinegumi, napamusoro pemisoro yacho mazita okumhura Mwari.
Satani akapikisa Mosesi akafamba Eksodo yekutanga, achiburitsa vaIsraeri kubva muEgipita sezvo vaitenda kumaGwaro akanyorwa emaBhuku mashanu eBhaibheri akanga anyorwa naMosesi.
Zvino muchisimbiso chekutanga Satani aipikisa Eksodo yechipiri apo chiKristu chakabuda kubva muchiJuda kupfurikidza kutenda muShoko rakanyorwa naSt Pauro nemaapositora vakanyora Testamente itsva.
Sezvazvaive apo Farao akaedza kuuraya maJuda,Satani akakurudzira maRoma kuti auraye maJuda aisvika 3 miriyoni pakati pa 64 na 312 AD.
MaKristu muchisimbiso chechipiri vakatuka Magwaro vachitevera chinyakare uye tsika dzevanhu uye zvematongerwo enyika nekupira kwemapegani uyezve firosofi dzaive dzakachenjera dzemaGiriki idzo dzinoita kuti vanhu vave vakangwara pakurwira nekuvhariridza chakaipa.
Chisimbiso chechitatu chakaratidza mutsiridzo yakaita seyaLuther naWesley avo vakati dzorei kereke munzira yemaGwaro aMwari zvisinei nekumwe kukanganisa kwakasara kuri mukereke.
Zvino chisimbiso chechina chakakosha kwatiri nhasi uno nekuti chinotsanangura nguva yatiri yekereke yechinomwe. Iyi ndiyo yakanyanya kutaurwa uye kusimbirirwa nezvayo naJesu.
Iyi ndiyo Eksodo yechitatu apo Mwenga waJesu anotenda muBhaibheri anobuda muzvitendero zvemasangano mune avo vanoramba vakaputirwa netsika uye zvinyakare zvakagadzirwa nevanhu uye dzidziso dzisina kunyorwa muBhaibheri.
Nguva iyi inoperera muKutabudzika kukuru apo rufu rwunouyawo.
Saka rwendo rwemweya rwatanga. Wotobatirira pachigaro chako nekuti hondo dzose hadzisi nyore.
ZVAKAZARURWA 4:6 Pamberi pechigaro chovushe pakanga pane gungwa rakaonekera, rakafanana nekristaro; napakati pechigaro chovushe, napamativi ose echigaro chovushe pakange pane zvisikwa zvina zvipenyu, zvizere nemeso mberi neshure Kwazvo.
7 Chisikwa chipenyu chekutanga chakanga chakafanana neshumba, chisikwa chipenyu chechipiri chakanga chakafanana nemhuru, (dhonza duku) chisikwa chipenyu chechitatu chakanga chino chiso chakaita sechomunhu nechisikwa chipenyu chechina chakanga chakafanana negondo rinobhururuka.
Zvisikwa zvina zvakapoteredza chigaro chehushe kukurudzira nekudzivirira kereke yemaKristu panguva dzakasiyana siyana apo Satani sehutachiona hwakavanzika , anoramba achinyangira nekushandura nzira dzake dzekunyengera uye tsika muzvitendero.
ZVAKAZARURWA 6:1 Zvino ndakavona Gwayana richizarura chimwe chezvisimbiso zvinomwe, ndikanzwa chimwe chezvisikwa chezvipenyu zvina chichiti,nezwi remutinhimira huya uvone.
2 Ndikatarira, ndikavona bhiza jena, naiye wakanga akaritasva, wakanga anovuta; akapiwa korona, akabuda achikunda, vuye kuti akunde.
Vhesi 1 ne 2 (nguva yemakereke yekutanga neyechipiri yakange iri yekubva paCalvari muna 33 AD kusvika kunana 312 AD apo mambo Constantine paakamisa kuuraiwa kwemaKristu akaita chiKristu chitendero chaizozivikanwa kuva chitendero chemaRoma).
Kwaiva nechisikwa Shumba kuChokwadi chaive chakamiririrwa nemuporofita Pauro nemaapostora vakadzidza Shoko rechokwadi reShumba yerudzi rwaJuda, Jesu Kristu.
Pakutanga maKristu akagara mudzidziso idzodzi dzeTestamente Itsva dzemaapositora.
Chinhu chimwechete chehondo dzemweya idzodzi kuita kwemaKristu kwekuda kugara muzvitendero zvemaJuda uye kufadzwa nevatungamiriri vechiJuda.
ZVAKAZARURWA 2:9 Ndinoziva mabasa ako nokutambudzika kwako novurombo hwako, (asi uri mufumi), nokutuka kwaivo vanoti, tiri vaJuda, vasi ivo chaivo, asi isinagoge raSatani.
Izvi zvakanyorerwa kereke yechipiri Simirna, inobva pa mura iyo inoshandiswa kuzodza vakafa. Izvi zvinoratidza kuuraiwa kukuru kwakaitwa maKristu nemadzimambo eRoma. Vhesi iri rinoratidza zvakare kuti vatungamiri vaive maJuda vaive vachiri nekukonzeresa kukuru. Zvakatorera maKristu nguva yakarebesa kuti vabve pakuteerera mirairo yechiJuda uye mapira avo. Vazhinji vakaramba vakatarira kuruponeso runouya nemabasa emurairo.
Kuuraiwa kukuru kwakabatsira kuti makereke arambe ari munzira. Asi pakupera kwekereke yechipiri, kumakore akapoteredza 312 AD apo mambo weRoma Constantine akamisa kuuraiwa kwemaKristu vaive vatanga kubva pachiratidzo.
Kwakaitika kuuraiwa kunosvika kagumi kwairwadza kubva pana mambo Nero paakatanga kuuraya maKristu muna 64 AD mumashure mekupisa guta ReRoma akapomera maKristu.
Muna 312 AD maKristu anosvika 3 miriyoni aive auraiwa. MaKristu , kubva mukutya uye mukutenda, akatambira Constantine semutungamiri wekereke panyama nemufaro vakatevera chinangwa chake chechitendero chaikurudzirwa nezvematongerwo enyika apo vakatanga kubva pamaGwaro. (vachitora mazwi akaita seTiriniti , Kisimusi naPontifi). Hutungamiriri hwevanhu hwakatangwa apo Constantine akapa bhishopu weRoma mari zhinji nemuzinda wakanakisa weLaterani izvo zvakaita kuti bhishopu anzi ndiye mutungamiriri wemakereke ekumadokero. Saka muvengi akauya sebhiza jena (chitendero chine simba zhinji) raive nemutasvi aive neuta asi hapana kutaurwa nezvemuseve. Munyengeri wechitendero aripo pakuparadzira kutadza. Murume weuta haana basa nemiseve yatinoona. Akabudirira kwazvo nenhema dzake.
JEREMIA 9:8 Marimi avo miseve inouraya, anoreva zvinonyengera;
Uyu mutasvi Antikristu aive mweya wezvitendero uyo wakavaka kereke yeRoman Catholic ine masimba kwazvo iyo yakapamba chiKristu kusvikira pope Nicholas I (858-867) murume aikwanisa kwazvo uye aine masimba makuru, akasimudzirwa zvikuru zvekuti akagadzwa saka simba raPope rakanga risina anopikisa.
Mweya waAntikristu wakaziviswa munguva dzemakereke maviri ekutanga asi kukanganisa muchitendero uku kwekutambira hutungamiri hwevanhu semusoro wemakereke, nemazano evanhu, kwakaramba kuchienderera mberi munguva dzemakereke dzese. Kwakaramba kuchishanduka nekurasisa apo kwaiwedzera mazano matsva nedzidziso zvakaita senzvimbo muchamweya inoenda vanhu vasati vaenda kudenga, kuzvifadza, mvura tsvene, mamass, kutevera zvinodiwa memukuru wekereke, kunamata mai Maria nevamwe vatsvene vakafa, mifananidzo yevatsvene, masangano, amai vemasangano nezvimwewo zvakadaro. Zvese zinorasisa izvi zvichiri nesu nhasi nezvimwe zvinorasisa zvichiri kuramba zvichinyuka.
ZVAKAZARURWA 6:3 Wakati azarura chisimbiso chechipiri, ndikanzwa chisikwa chipenyu chechipiri chichiti: Vuya uvone.
4 Ipapo rimwe bhiza rakabuda ipapo riri dzvuku; wakanga akaritasva akapiwa simba kuti abvise rugare panyika, kuti vavurayane; akapiwa munondo mukuru.
Vhesi 3 na 4 anomiririra nguva dzemakereke yechitatu neyechina idzo dzakatanga kumakore akapoteredza 312 AD dzikaita nguva yerima iyo yakazopera makore akapoteredza 1 500 AD pakatanga mutsiridzo yaLuther. Nguva refu yaisvika makore 1 200. Mhuru yaive nenguva refu yekukura kuva dhonza. Dhonza harina mbeu inorarama ringori nesimba guru chete. Kereke yechiKristu haina kusimukira munguva yerima asi yakadzikira kunopinda muzvieraera uye muhondo dzezvematongerwo enyika uye hondo dzakaipa dzakaita semakurusedhi. Kurovererwa, kuba, kubatwa chibharo (kwemaJuda aigara munzira yekubva kuParestina) kwemaMosiremu aigara kuParestina kwakamutsa kusanzwanana kuchiripo nanhasi uno, kwakapa maMosiremu anoita zvematongerwo enyika kana kuongorora zvechitendero rudo rukuru rwekutsiva kana vatadzirwa kumadokero, kunyange zvazvo America yaive isati yaonekwa. Asi vatendi vechiKristu vechokwadi, vakaedza kufamba nemaGwaro, vaifanira kuva vakasimba kwazvo kuti vakwanise kukunda munguva refu dzerima apo kwaive nevaivavhima vakawandisa vemauto aitsigira maPope. Chisimbiso ichi chakaburitsa pachena kurudziro yemauto uye simba remadzimambo ezvematongerwo enyika apo vakabatana nekereke yeRoman Catholic. Constantine airipisa avo vose vaibuda muchitendero zvakanyanya. Aitsigira bhishopu weRoma saka simba remauto ndiro rakabata basa kuvaka simba rekereke yeRoman Catholic. Pope Leo I (440 -461) akatambira chinzvimbo chechipegani chekuBabironi chekuva Pontifi. Akazvipa zvakare simba rekuuraya vese vaipikisa chitendero cheCatholic saka kuita uku kwakazopedzisira kwauraisa vanhu vanosvika 68 miriyoni vaisatenderana nechiCatholic kwakazopera mumakore akapoteredza 1 600 AD. Ongororo muimba yemutemo yekuSpain dzaivewo chimwe chiitiko chakazivikanwa nekuipa kukuru mukuita uku kwehondo dzezvitendero.
Hondo yakaipisisa yerusununguko yekuItaly yakatora makore makumi maviri (533-552) kubva kumarudzi aisatevera Tiriniti emaOstrogothi aitungamirirwa naTheodoric nemauto amambo Justiniani vairwira kuti vadzosere Pope aitevera Tiriniti pachinzvimbo paRoma, izvi zvakasiya Roma yava matongo neItaly yaparadzwa. Nzara nezvirwere zvakatevera Europe ikapinda munguva yechando, rima netsvina, totenda idzodzi hondo dzezvitendero.
Iyi yaive nguva yeDhonza. Dhonza chisikwa chinotakura mutoro chinozouraiwa kumapeto kwehupenyu hwacho sezvo nyama yaro yakakosha haingaraswi. MaKristu echokwadi akabata basa guru kupfuura munguva yerima vazhinji vavo vakauraiwa. Mweya Mutsvene wakavapa kurwa kwedhonza. Vakashanda nesimba munguva idzodzo dzekusaziva vakatarisana nekufa kwavo vasina kutya. Kunyengera muchitendero kwaive kwasimbiswa nezvematongerwo enyika uye simba remauto mukati menguva mbiri dzemakereke idzi asi mweya wakasangana uyu wakabva wapfuurira kunopinda munguva dzese dzemakereke dzaive dzasara. Kereke yaive yaroorana nezvematongerwo enyika zvakasimba uye netsika dzemapegani . Fungai nezvemaIsita egi. Fungai nezva 25 Zvita. Fungai nezveTiriniti. Makadhinari. Mufananidzo wemuchinjiko. Korona kana tiara inopfekwa naPope nezvimwewo.
ZVAKAZARURWA 6:5 Wakati azarura chisimbiso chechitatu, ndikanzwa chisikwa chipenyu chechitatu chichiti: Vuya uvone. Ndikatarira, ndikavona bhiza dema; wakanga akaritasva akanga ari nechiyereso muruvoko rwake.
Vhesi 5 ne 6 anomiririra nguva yemakereke yechishanu iyo yaive nguva yakaparidzwa ruponeso naLuther neyechitanhatu apo John Wesley akauya akaparidza hutsvene nerudo pakati pehama munashe kune avo vaive vasati vava mukereke. Kurudziro yake yakaunza nguva yakanaka yemaMishinari. MaMishinari aitenda kuti kereke yaive kirabhu yairarama kuitira kuti vaive vasiri chikamu chayo vawanewo chimwe chinhu kubva kwairi saka vakapedza nguva yavo zhinji yavakararama vachiedza kutenderera pasi rese vachiedza kuti vanhu vakwanise kuwana mubairo wehutsvene neruponeso. Iyi yaive yava nguva yechisikwa munhu. Ruzivo nehuchenjeri kubva mukudzidza kwevanhu kwakaita kuti vakwanise kuona kukanganisa kwaive nesangano reRoman Catholic. Asi kudzidza kwevanhu kwaive kwakapihwa miganhu pazaruriro dzezvemweya. Kwaive kuchiri nezvakavanzika zvizhinji mumaGwaro zvaive zvisati zvaburitswa pachena. Chivi chekutanga chaimbova chii? Zita raMwari nderekuti kudii? Pamusoro pazvose Baba,Mwanakomana naMweya Mutsvene mazita ezvinzvimbo. Chinangwa chaMwari kwatiri chekurarama nekuzvirongera kana kuzviraramira nenzira yatinosarudza zvingashanda sei pamwechete? Makereke anova maCalvanist kana vakaramba vakasimbirira pakuti Mwari akaita zvese kare munguva yaLuther kana kuva maArmenian kana vaitevera kuzvisarudzira panguva yaWesley.
Asi ruzivo rwevanhu rwaikurudzirwawo naMwari kuti vanyore Bhaibheri reKing James rinova Bhaibheri rine chokwadi uye rakanaka.
Tsika dzevanhuwo dzakasimukira pasi penguva yechisikwa munhu, Shakespeare kune zvezvinyorwa, Michelangero, leonard da Vince mune zvearti, bach naBeethoven mune zvemimhanzi, Isaac Newton mune zvemetsi.
Apa ndipo pakasvika bhiza dema remadhimoni. Kereke yeRoma yakapindura nenzara ichiyera zviyo ichitengesa denari+ waiva muhoro wemunhu mumwe pazuva zviyo izvozvo zvaikwana kubika rofu rimwe rechingwa. Vanhu vakatanga kurasirwa kure nemaGwaro neruponeso muna Kristu. Vaitengesa chingwa chehupenyu nekuita mari kubva muchitendero nekunyengera kwavo apo munhu aitenga mukana wekuregererwa zvivi uye kubhadhara mari kuti mweya wake ugokwanisa kubva munyika dzimu uchienda kudenga. Chitendero chakava bhizimisi guru , raipawo mari zhinji. Hazvishamisi kuti nei Jesu akatsamwa kwazvo nevaitamba njuga nekutengesa mutemberi. Kuita mari kubva muchitendero kune mweya yemadhimoni inokutevera.
Vanhu vemukereke yeRoman Catholic vaikoshesa tsika dzavo dzaimisikidzwa nevanhu uye chinyakare chakaziviswa nevanhu, vachibira vanhu mukana wekuziva nekudzidza maGwaro uye kuwana ruponeso. Madhimoni mweya unopikisa Shoko raMwari. Chimwe chikamu chinopikisa chemutsiridzo chakaitwa neRoman Catholic kupikisa mutsiridzo yaLuther iyo yakaita kuti mweya iponeswe kupfurikidza kutendeuka kubva pazvivi nekugamuchira Jesu saIshe nemuponesi wavo, chakaita kuti vazhinji vaisvika mamiriyoni vaipikisa kuita kweCatholic vafe.
Mazuva ano pane musiyano mukuru pakuva unotevera maGwaro zvakanyatsonaka nekuti vazhinji vanopedzisira vaona seunopenga.vanotoda kuti utende zvinotaurwa nevanotungamirira kereke. Kutenda zvinotaurwa namufundisi.
(Zvisinei nekuti vafundisi vanopikisana pachavo) vanotenda kuti hazvibatsire kutsigira rutendo rwako nezvinobva mumaGwaro. Izvi zvese zvinokonzerwa nekuti zvishoma shoma zvinozivikanwa nevanhu zviri muBhaibheri iro rave kuiswa muchikamu chekuti vanhu vazhinji vanaro asi ndiro Bhuku risina vazhinji vanoriverenga.
Nhasi uno maKristu mazhinji haakwanisi kutsigira zvaanotenda mazviri neBhaibheri.
Bvunza muKristu kuti anoenderei kukereke musi weSvondo. Ndicho chinhu chimwechete pazvinhu zvavari kunatsa asi unonzwa achiti nekuti izuva raJehova kana kuti nekuti iSabata. Hapana pakati pemhinduro idzi yechokwadi, zichibva mumaGwaro. Saka vanhu vanoita chinhu chakanaka asi nezvikonzero zvisirizvo. Zvakaoma.
Asi vanopikisa chiCatholic vakasanganawo nenguva dzavo dzakaoma. Servetus, chiremba wekuSpain, akapikisa Tiriniti nekuti tsananguro zhinji dzinoshandiswa kutsanangura tiriniti hadzimo muBhaibheri. “Mwari mumwe muVanhu vatatu”. “Munhu wechipiri mukuzara kwevuMwari”. “Jesu ari mukuzara kwevuMwari”. “Baba neMwanakomana vakaenzana”. “Baba neMwanakomana vakangofanana”. Nezvimwe zvakadaro.
Jean Calvin, mumutsiridzi mukuru pakati pevaipikisa chiCatholic kuSwitzerland, haana kugona kudaira kumhura kwaServetus asi akagadzirisa dambudziko iri nekupisa Servetus ari mupenyu. Hazvishamisi kuti nei masangano anopikisa akaramba achitevera Tiriniti.
ZVAKAZARURWA 6:7 Wakati azarura chisimbiso chechina, ndikanzwa izwi rechisikwa chipenyu chechina richiti; Vuya uone.
8 Ndikatarira ndikavona bhiza rakachenuruka; wakanga akaritasva, zita rake rufu; vuye Hadhesi rakamutevera ivo vakapiwa simba pamusoro pechechina chenyika, kuti vavuraye nemunondo nenzara norufu.
Vhesi 7 inguva yekereke yechinomwe. Nguva yegondo. Yakatanga makore akapoteredza 1906 richangopfuura pakatanga mutsiridzo yePentecosti kuAmerica. rubapatidzo rweMweya Mutsvene rwakadzoserwa uye segondo, vanhu vakapinda mumweya kupfurikidza Mweya Mutsvene. Vanhu vakakwanisawo kugadzira ndege zvekuti vakatanga kukwanisa kufambirawo mudenga. Muna 1947 mutumwa akazviratidza kuna William Branham kuAmerica akabva atanga kuburitsa pachena zvakavanzika zviri mushoko raMwari. Gondo rinoona zvakapinza, saka Mwari akapawo chipo chekuona zvakapinza kukereke, muono uri nani. Mufananidzo unonyatsooneka kana zaruriro yezvakavanzika zvemumaGwaro.
America yakaenda mberi munezvemweya kupfurikidza kuita kwePentecosti nezaruriro yehama Branham mune zvemaGwaro. Pamusoro pazvose America yava pamusoro-soro mune zvemuchadenga nekuda kwendege dzayo uye maroketi, kusanganisira ndege mbiri dzakadonhedza mabhomba emaatomu kupedza hondo yepasi rese yechipiri. Neil Armstrong yeAmerica yakamhara kumwedzi muna 1962 mukumhara kwerudzi rweruna kunodaidzwa kuti “Eagle”.
Saka kereke yekupedzisira inguva yegondo yekubhururuka, gondo rinobhururuka rinopiwa maziso seeshiri ekuona hurongwa hwaMwari hweruponeso pamusoro pevanhu uye kukwanisa kuona hondo yaSatani inenge ichitevera.
ZVAKAZARURWA 10:7 Asi namazuva enzwi remutumwa wechinomwe, kana vodo-kuridza, zvakavanzika zvaMwari zvichapedziswa,sezvaakaparidzira varanda vake, ivo vaporofita.
Zvakazarurwa 10:7 pakaonekwa mutumwa achipedzisa zvakavanzika zvaMwari. Tiriniti haisi Mwari. Jesu Kristu ndiye Mwari. Zita raMwari harisi Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Izvi zvinzvimbo zvaMwari zvitatu. Zita raMwari ndiJesu Kristu.
Chakavanzika chechivi chekutanga, chiratidzo chechikara, mbeu yenyoka, makereke manomwe nezvimwe zvakadaro. Zvose zvakabuditswa pachena. Chinhu chimwe chikuru kushandisa maGwaro kuburitsa mamwe magwaro pachena.
Kereke yenguva yekupedzisira inofanirwa kudzokera kudzidziso dzekereke yekutanga yaive naSt Pauro nemaapositora. Dzidziso nezvatinotenda zvinofanirwa kubvira kuTestamente yekare kusvikira kuTestamente Itsva.
Tsigirai zvamunotenda neBhaibheri.
Hakuna munhu, Kunyangwe mutumwa wenguva yekupedzisira anotenderwa kudzidzisa chinhu chisina tsigiro inobva muBhaibheri. Kana munhu akatitungamirira kupfurikidza kutiverengera Bhaibheri ipapo tinenge tichitevera Bhaibheri kwete munhu.
Zvino kunotevera vhesi 8. sere zvinoreva chikamu chitsva. Kutambudzika kwasvika.
Chisimbiso chechitanhatu chinotaura nezvenguva yekutambudzika. Kutaurwa kwakaita nguva yeKutambudzika pavhesi rechipiri rechisimbiso chechina zvinoreva kuti kutumira kwakaita Mwari mutumwa wenguva yekupedzisira aida kuti tipunyuke kuKutambudzika. Vaya vasingadzokeri kunowarira kutenda kwavo mumaGwaro vachapedzisira, zvisinei nekushingirira kwavo, vave munguva yeKutambudzika kukuru. Chisimbiso chechina chinotaura kereke yechinomwe iyo isinganyatsoperi nekuti ichapinda yova nguva yeKutambudzika.
Tinoda muono wakajeka pamusoro pemaGwaro, wemweya weGondo kuitira kuti tisimuke tinochingamidzana naIshe Jesu mumakore kana Auya.
Nguva yekereke yechinomwe ichapera chete kuMwenga waKristu paachange afuka kusaora osiya nyika ino kuti aende kumabiko eMuchato neGwayana.
1 VATESARONIKA 4:17 Zvino isu vapenyu, vakasara, tichatorwa pamwechete navo mumakore, kuti tichingamidze Ishe mudenga; naizvozvo tichava naShe nguva dzese.
Chisimbiso chechina ndicho chisimbiso chakanyanya kukosha kwatiri nekuti ndicho chega chiri kurarama maKristu anhasi.
Tine sarudzo. Kudzokera kuBhaibheri kana kuparara muKutabudzika.
Uku kuchema kweGondo kubva muchadenga. Maziso eGondo anoshamisa anoreva kuti tinofanirwa kuona zvakapinza muzvakavanzika zvaMwari zvinosiiwa nevazhinji mumakereke nekuti hatina kuona kwakadzama.
Semuenzaniso, nei Jesu akanyora muguruva paakaregerera chifeve? Nei akanyora ruviri muguruva? Nei paive nematengu manomwe nematengu mashanu echikafu chakanga chasara paakapa chekudya kuvazhinji? Nei akafadzwa nemukadzi muHedheni, waakati imbwa, paaida mafufu kubva patafura yevana?
MumaBhuku akanyorwa navaapostora maviri tinoona vatumwa vaviri pabwiro risina chiro. Pane mamwe maBhuku maviri tinoona mutumwa umwechete. Nei paine musiyano?
Kana tikasava nekunzwisisa kwakadzama kwezviitiko izvi, asi tongoedza kuzvitsanangura kuti zvidarike kana kuti tozviona sezvisina kukosha, tinenge tingori neruzivo rwechisikwa munhu, kunova kudzidza kwehuchenjeri hwevanhu, asi kwete muonero wakadzama wechisikwa Gondo uyo wakavimbiswa kuti uchapiwa kwatiri munguva yekupedzisira kwekereke yechinomwe.
Ruponeso haisiri iyo nyaya pano. Zvakagara zviripo kuti tinofanira kuponeswa. Hutsvene kana rubapatidzo rweMweya Mutsvene hazvisi nyaya zvakare. Zvakakosha kumuKristu wese.
Chakakosha pano iChokwadi chemuBhaibheri.
Kana tikatenda kukukanganisa tiri kunyengerwa. Kana tisingakwanisi kuva nemuonero wakadzama mumaGwaro tinenge tichinyengedzwawo nevatungamiriri vedu vari kutirovedzera kukusaziva kwavo.
Kusaziva uku kuchabviswa matiri nekurwadza kwenguva yeKutambudzika.
Hakuna muKristu achapinda munguva yeKutambudzika akauraiwa mukuita kwechisatani kwakaipisisa achava neshungu dzekutevera hutungamiri hwevanhu kana mifungo yake nezvido zvake zvakare.
Saka pavhesi 8 rufu rwunopinda munguva yeKutambudzika mukereke isingateveri maGwaro, inoita zvematongerwo enyika kunotanga kuuraya kukuru kusakambooneka kubvira kunhoroondo. Hutungamiri hwevanhu hunoburitsa mukuru wavanovimba naye, mutumwa werufu. Mweya yakaipa yese yakafamba kupfuura nguva dzese dzemakereke inobatana kuvaka kerekeke huru inotonga pasi rese. Mushina waSatani wekupedzisa kuuraya.
Nei maKristu achawanikwa ari muchinzvimbo cherufu ichi? Nekuti vakamira kutaura nekushadisa chokwadi chinobva mumaGwaro. Vakabatikana nezvinhu zvizhinji zvekuti havana nguva yekudzidza Bhaibheri. Rinotova basa rakaomarara. Vanozvivimba zvakanyanya pakufananidza zvavanotenda nemaGwaro nekuti havadi kutenda kuti vangangodaro vachikanganisa. Havadi vanhu vanoda kuvagadzirisa. Vanotya kupikisana nemufundisi wavo nekuti vanowana ruchengetedzo muruzhinji. Vanonzwa kupombonoka nekusununguka vachiita zvitendero kana tsika dzakagadzirwa nevanhu nemuhutungamiri hwevanhu uho hunovaita kuti vasakwanise kuzvifungira. Saka muKutabudzika vachava nemutungamiri wavo mukuru ...... antikristu.
Vhesi 7 rechisimbiso chechina rakakosha.
Nguva yekereke yechinomwe inotambira mutumwa kuzotiyambira nezvezuva rekutongwa uye kuzotidzidzisa chokwadi chinobva muBhaibheri kuti tipunyuke kutsamwa kuri kuuya. Tinofanira kutora dzidziso yake toitsigira nemaGwaro. Ipapo tinenge tisingateveri iye, tinenge tichitevera Bhaibheri. Hakuna muKristu anofanira kutevera munhu. Tiri kutevera Kristu kana chete tichitevera maGwaro.
Saka chisimbiso chechina chinotora kereke chonoisiya muKutabudzika. Kushandurwa kwakazara kwemamiriro ezvinhu. Apa takutarisisa maJuda nekuti maJuda achadzoka kuShoko mukati menguva yeKutambudzia kukuru.
Chisimbiso chechishanu chakaona maJuda achiuraiwa izvo zvakatanga nekuparadzwa kwetemberi iyo yakaparadzwa nemaRoma muna 70 AD pasi pehutongi hwemukuru weuto Titusi. MaJuda 1 100 000 akafa muchiitiko ichi. Temberi yakaparadzwa.
Uku Kwaive kutambudzika kwemumusha memaJuda chete. Zvino chisimbiso chechishanu chakaronda maJuda munhoroondo yavo yese yemakore 2 000 apo ndirwo rwakava rudzi rwune nhoroondo yekushupika nekuuraiwa kwenguva refu. Zvino imwe nguva yekutambudzika yaive yaHitira paaiita makamba ekuuraya akaipa zvakarwadza pasi rese zvekuti vanhu vakareverera kuti vapiwe nyika yavo Parestina. Iye zvino vave munzvimbo yavo yavakapiwa naMwari kwavachasangana naMesiah paachauya paKutambudzika kukuru.
Chisimbiso chechitanhatu inguva yekutambudzika kukuru. Ishanduko yakazara yemamiriro ezvinhu. Pope ane hukasha, hutsinye uye akaomera achatora chinzvimbo chekutonga nyika. Inguva yakaomarara kuti iraramike.
Mukati menguva yeKutambudzika kukuru uku ndipo pachadzoswa maJuda 144 000 kuna Jesu semuponesi wavo nemaporofita maviri Herija naMosesi, avo vakakunda totenda kukwanisa kwavakaita kunopindawo muhushe hwaMwari.
Chisimbiso chechinomwe Kuuya kwaMwari, chatinoziva isu nezvayo runyararo chete. Saka chinhu chikuru chakavanzika chicharamba chisingazivikanwe.
ZVAKAZARURWA 8:1 Wakati azarura chisimbiso chechinomwe, kunyarara kukavapo kudenga kunenge sehafu yenguva.
Saka Mateo chaputa 24 inotiudza pamusoro pemaJuda pamusoro pekutambudzika kubvira pakutambudzika kwavo vega apo pakaparadzwa Jerusarema nekuti vaive varamba Ishe wavo nemakore avo 2 000 anorwadza ekuuraiwa ayo anozoperera muKutabudzika kukuru pavachadzoka kuna Mesiah.
Zvino chiitiko ichi chinobva chadzoka kukereke. Kanhoroondo kaduku kekuti kutadza kwakauya sei mukereke yemaKristu kanopiwa muchikamu chekutanga.
Izvi zvakakosha nekuti kukanganisa kuri mumakereke ndiko kuri kutyaira pasi rino rakananga kunguva yekutambudzika kukuru.
Muchidimbu, Jesu akatsanangura kuti kereke yenguva yekupedzisira iri muhafu yekutanga yechisimbiso chechina (Zvakazarurwa 6:7) inofanira kugadzirira kuti ipunyuke munguva yeKutambudzika kukuru. Ndicho chinhu chatinofanira kunyanya kufunga nezvacho nhasi uno. Kuzvinzvera kupfurikidza maGwaro kwakakosha kana tichida kuva vatsvene.
Kereke yekupedzisira inoda ruponeso, hutsvene uye rubapatidzo rweMweya Mutsvene izvo zvakadzoswa nevamutsiridzi. Iyezvino, tichingowedzera, tinodawo kunzwisisa chokwadi kwakakwana kuti tikurire nhema dzaSatan dzakakura, idzo dziri kukwikwidza mumakereke emasangano chichechi-chechi nehutungamiri hwacho hwevanhu venyama netsika dzavo.
Jesu aive akatsamwa paakarova vanhu vaiita zvemari muTemberi sezvo vaiva vanhu vaizviunganidzira mari kubva muchitendero. Uyu waingove mumvuru wezvaizouya mukereke yenguva yekupedzisira umo chiKristu chashanduka kuve bhizimisi guru kwazvo.
Makereke akapfuma kwazvo, maKristu nhasi uno anosvaga purofiti kwete muporofita. $ muTestament yekare yaimiririra ruponeso apo Mosesi akasimudza Nyoka patsvimbo kuti maJuda aporeswe mushure mekurumwa nenyoka yaive nehuturu. Nhasi maKristu anotenda kuti ruponeso runouya nemari zhinji, dhora rekuAmerica $.
MATEO 24:1 Zvino Jesu akabuda patemberi, akati oenda vadzidzi vake vakauya kwaari kuzomuratidza dzimba dzetembere.
Chakakanganiswa nevadzidzi kwaive kuyemura zvakaitwa nevanhu. Tese tinobviswa panaMwari nechinhu chikuru chatinenge takwanisa kuita.
Chinhu chavakatadza kuona ndechekuti Jesu aive abuda mutembere. Akabuda akaenda.
Kusimbisa kaviri kubva kwaJesu. Ndiye aive Shoko. Pakabva Shoko, Mweya Mutsvene waive pedyo kuzobvarura chidzitiro cheTemberi ukabva waendawo. Pasina Shoko, chivakwa chakaitwa nevanhu chaive chisina zvachinoreva. Zvikuru sei, temberi yakavakwa kudzoserwa pakurumbidzwa kwayo naHerodhi, panyama aive akavenga Jesu akaedza kumuuraya achiri nemakore maviri. Vadzidzi vaiyemura chivakwa chaive chakavakwa nemunhu aive akaipa.
Nhasiuno tinoyemura zvivakwa zvemuVatican zvakanakisa. Zvimwe zvezvivakwa izvi zvakavakwa nemabwe akabva pagomba reshumba (coloseum) yaishandiswa kuuraira maKristu enguva yekereke yekutanga, munguva yechisikwa Shumba, vaikandwa kushumba kuti dziuraye. Gomba reshumba iri rakavakwa naVaspasian naTitus vakashadisa pfuma yavakaba kuTemberi yekuJerusarema pavakaiparadza. Vakabva vatora maJuda 35 000 kubva kuJerusarema kuenda navo kuRoma vakavamanikidza kuvaka chivakwa cheColiseumu. Nehumbwende tinoyemura zvivakwa zveVatican tichikanganwa chinhu chikuru chimwechete chekuti Shoko raMwari haridzidziswi ikoko. Makambonzawo here Pope zuva rimwe zvaro achiti tinofanira kutendeuka tobhabhatidzwa nezita raJesu Kristu? Asi ndizvo zvakataurwa naPetro kuna Mabasa avaapostora 2:38.
MABASA AVAAPOSTORA 2:38 Petro akati kwavari: Tendevukai mumwenemumwe wenyu abapatidzwe nezita raJesu, kuti mukanganwiwe zvivi, mupiwe chipiwa choMweya Mutsvene.
Asi maCatholic vanoti ndiye Pope wavo wekutanga. Vanoti maPope haakanganise. Zvichireva kuti Petro haana kukanganisa paakataura izvi. Saka nei Pope asingatendi mune zvakataurwa naSt Petro.
Izvi zvioratidza humbwende huri mumabasa emunhu. Chese chinovakwa nemunhu chinorarama kwekanguvana. Vaiyemura chivakwa asi chivakwa chimwechete ichocho chaive chakafa kare. Nhasi uno tinoyemura mafambiro ezvinhu mumaKereke edu asi zvese zvakabva paShoko kare. Kuita uku kwakafa zvakare. Nei tichiyemura zvivakwa zvikuru nhasi uno? Zvinovharidzira huori, huipi budiriro munyaya yezvinhu zvatinozviunganidzira izvo zvese zvisingafadzi Mwari achaparadza zvese kana nguva yeKutambudzika kukuru yasvika iyo ichazoperera muhondo yeAmagedhoni. Saka tinofanira kudzidza kutsungirira pane zvemweya. Panowanikwa Shoko raMwari chete ndipo pachange paine chinhu chakakodzera kurindira. Zvimwe zvese zvakaputira zvombo zvinoparadza zvakaita sebhomba reatomi. Ariko nhasi uno mabhomba eatomi anouraya zvakanyanyisa . Anokwanisa kuparadza vanhu tese zvakapetwa kaviri kana katatu, oita mitumbi yedu madota. Saka ngatitsvagei chokwadi kwete hutefe-tefe kana zvinotiitira.
MATEO 24:3 Wakati agara pagomo reMiorivhi vadzidzi vake vakauya kwaari vari voga vakati, tivudzei kuti izvi zvichazova rinhiko? Nechiratidzo chekuuya kwenyu nechekuguma kwenyika chichava chipiko?
Vhesi iri rakakosha.
Mibvunzo mitatu yakabvunzwa.
Mubvunzo 1: zvinhu izvi zvichazova riinhi? Nemamwe mazwi, Temberi yaizoparadzwa riinhi?
Mubvunzo 2: chiratidzo chekuuya kwenyu chichava chii?
Izvi zvinotitora zvotisiya tiri muhafu yekutanga yechisimbiso chechina. Nguva yeGondo apo chokwadi chinoratidzwa kuMwenga waKristu kuitira kuti vapunyuke kunguva yeKutambudzika kukuru kana kuti chokwadi chinorambwa nemaKristu mazhinji avo vanotevera chinyakare chavo uye vatungamiriri vavo vachinopinda muKutambudzika kukuru. Tese iyezvino tiri kugadzirira kunosangana nechikomba kana kuti kunosangana nechikara. Tichadya kana kuti tichadyiwa nemagora paAmagedhoni.
Vadzidzi havana kubvunza kuti aizouya riini. Vaiziva kuti ichi chaive chakavanzika zvachose.
(Chero muKristu anofunga kuti anoziva kana kuti anobvunza kuti Ishe vachadzoka riini haasi kubvumirana nevadzidzi. Saka mubvunzo uyu hautenderwi uye unobvunzwa chete nemunhu anoshandiswa nekukanganisa asiri munzira zvachose. Zvakatoipisisa pane uyo anofunga kuti Mwari akatouya.)
Saka, kutevera maGwaro chatingakumbira kuziva Chiratidzo cheKuuya Kwake. Izvi ndizvo zvakabvunzwa nevadzidzi.
Asi rimwe dambudziko nemubvunzo uyu nderekuti hatifaniri kutsvaga chiratidzo.
MATEO 16:4 Rudzi rwakaipa rwunofeva rwunotsvaka chiratidzo asi harupiwi chiratidzo asi chiratidzo chemuporofita Jona. Ipapo akavasiya akabva.
Jesu akamuka kubva kuvakafa. Hakuna umwe mukuru weChitendero akagona kuita izvi. Saka ichi ndicho chiratidzo chatinorangarira Svondo yega yega apo tinoungana tichinamata nekubatira Mwari.
Jesu akazopindura sei mubvunzo uyu?
Hachisi chiratidzo chimwechete chete cheKuuya kwaJesu kwechipiri, icho chatinozotsanangura zvisiriizvo sezvakaitwa gore rakaonekwa muna 1963 rakatsanangurwa richinzi raireva Kuuya kwaMwari. Vanhu vakati Jesu akauya seGore saka nguva yenyasha yaive yadarika saka taifanira kusiya kudya chidyo nezvimwe zvakadaro. Kukanganisa kwakaramba kuchiwedzera saka kwakaramba kuchida kugadzirisa maGwaro sekukura kunoramba kuchiita hutachiona. Asi Jesu akapindura maererano nezviratidzo zvizhinji zvenguva yekupedzisira. Izvi zvinotsanangura nzira ichange vanhu vachifunga uye vachitora zvinhu nayo pedyo nekumagumo kwenguva yekereke yechinomwe, nguva yeKuuya kweChipiri isati yasvika iyo ichatipunyutsa kuti tisasvike munguva yeKutambudzika kukuru.
Asi chakanyanya kukosha, kana tichitsanangura zviitiko zvenguva yekupedzisira, akatora nguva refu achitiyambira kuti tinofanira kufunga kana kuita zvipi kuti tipunyuke mukutambudzika kukuru.
Mubvunzo wechitatu: Zviratidzo zvekuguma kwenyika.
Mubvunzo wakaoma kupindura. Amagedhoni ndiko kuguma kwezviitiko zvenyika yedu (huipi hwedu hwechimanje-manje huri mubudiriro inobva pamakaro, huwori kuzviunganidzira pfuma uye kuda kuzvifadza) asi makore 1000 achatevera zuva rekutongwa richasvika apo gungwa richanyangarika nyika itsva yovapo. Saka ndechipi chiitiko pakati pezviviri izvi chavanofunga kuti chichava magumo enyika.
Jesu akatanga kupindura.
Mubvunzo wekutanga: Temberi ichaparadzwa riini?
Jesu haana kupa zuva. Iyi iyambiro kwatiri tese. Musaedze kubatanidza mazuva kana kufungidzira muchishandisa metsi. Pachinzvimbo akaenda pamoyo wedambudziko chairo rinova kusatenda kumaGwaro. Kukanganisa kwese nezvivi zvinobva kuna Satani. Saka Satani ari kushanda kupfurikidza ani?
Satani ndiye munyengeri mukuru. Saka pachinzvimbo chekuburitsa pachena kuti Temberi ichazoparadzwa riini, Jesu akaona zvakakosha kuburitsa pachena kuti achaiparadza ndiyani.
Ichi ndicho chisimbiso chekutanga. Mutasvi webhiza jena munyengeri wezvechitendero anotanga rwendo rwake kuti anopambe maKristu kuti avasiise kutenda kuBhaibheri pachinzvimbo votenda kuvatungamiri vavo, vanhu venyama nezvinyakare zavo.
Nemamwe mazwi munyengeri wechokwadi wechiKristu ndiye achaparadza Temberi. Ndiyani akaparadza Temberi ? MaRoma pasi pemutungamiri wavo Titus muna 70 AD. Saka mhinduro yake ndeiyi: Kuburitsa pachena kuti Temberi ichaparadzwa rini kwaive kusina kukosha asi kuti achaiparadza ndiyani, ndizvo zvakakosha. Muparadzi aive asingori muvengi wemaJuda asi muvengi wekereke zvakare. Hunyengeri pamweya huri kuparadza maKristu ndihwo zvakare hwakaparadza Temberi. Mweya uyu uchabva kuRoma. Muparadzi mumwechete akaparadza maJuda ndiye zvakare achaparadza maKristu.
Nei asina kupa nguva? Nekuti kuparadzwa kweTemberi kwekuputsanya ibwe rimwe nerimwe rechivakwa nekuuraya maJuda aidarika miriyoni rimwe muJerusarema zvaive zvakaipa zvachose. Asi pasina nguva zvaizongova tsimba yaizosara kuonekwa munhoroondo.
Kurwadza kwazvo zvaizova mumumvuri wekuparadza kukuru kunorarama kwemakore 2 000 enhorondo yekereke apo Roma inoita rudo rukuru rwekuuraya chero munhu asingatendi muchiCatholic.
MuTestamente yekare maJuda akaponeswa serudzi rwese.
MaJuda akaramba Mesias wavo paCalvari. Mwari haachashandi navo serudzi. Vaive vakufanira kugamuchira Jesu mumwe nemumwe wavo, sezvinoitawo maHedeni. Makore akazotevera Temberi yavo yakaparadzwa mukutambudzika kukuru kwemumusha mavo kwekuuraiwa kukuru apo maRoma akazadzwa nerudo rweropa, moto neruvengo rukuru vakavarwisa. Kuuraiwa kwemaJuda anodarika miriyoni uku kwaive kutambudzika kwemumusha mavo chete kwakabvisa maJuda panhandere yeMweya. Mwari aive atendeukira kumaHedeni.
Zvino muHondo yePasi rese yechipiri, vachishandisa makamba matanhatu ekuuraya nemweya wegasi kuPoland, maNazi aHitira akauraya maJuda mamiriyoni matanhatu. Uku kwaive kuratidzirwa kwenguva yeKutambudzika kukuru ichauya. Vadzvanyiriri vanotungamirira vakasunungura madhimoni ehondo pamusoro penyika yevanhu veIsraeri.
Horokasiti yaive nguva yekutambudzika duku kana kuti nguva yeKutambudzika isina kunyatsokwana. Mwari akasiya maJuda muna 70 AD mudutu remoto rekuuraya nekuparadza saka aive odzokera kwavari nekumwe kuuraya kukuru. Vakazotanga kukunda kutora musha wavo muna 1948 apa vakadzoka panzvimbo yakakodzera kuti vatarire Kuuya kwaMesia wavo vari. Mwari anodzokera kumaJuda kumashure kwemakore 2 000 zvichirevawo kuti ave kufuratira maHedeni.
MATEO 24:5 Nekuti vazhinji vachauya nezita rangu, vachiti ndiri Kristu vachitsausa vazhinji.
Chisimbiso chekutanga chaive nemutasvi webhiza Jena, munyengeri wezvitendero, uku kwaive kusimuka kwekereke yeRoman Catholic. Chikamu chechitedero chinoita zvematongerwo enyika ichi chaizouraya vanhu vanosvika 68 miriyoni vaive vasingateveri chiCatholic. MuKristu wega-wega idombo rinorarama muTemberi yeMweya yaMwari iyo yakavakwa naMwari mukati memakore 2 000. ndiyo Temberi yaMwari yechokwadi.
1 PETRO 2:5 Nemi vo, samabwe mapenyu, muvakwe muve imba yoMweya, muve vuprista vutsvene, kuti mubaire zvibairo zvoMweya, zvinofadza Mwari nekuda kwaJesu Kristu.
Roma yakauraya mamiriyoni evanhu ichiedza kuparadza muviri weTemberi weMweya waKristu. Mamiriyoni mazhinnji zvakare akaparara nekuti vakanyengerwa mukutenda mudzidziso nezvinyakare zvetsika dzeCatholic pachinzvimbo cheBhaibheri, saka zvisinei nekuzvipira kwavo havana kuzvitendera kuva chikamu cheTemberi yaMwari.
Roma yechipegani yaCaesari ndiyo yakaparadza Jerusarema.
Roma yechipope yemaPope yakaedza kasingaperi kuparadza maKristu aisatenderana nayo.
Roma ndiwo muzinda wakavakwa kukanganisa kuti kuve chikamu chechitendero chine simba zhinji. Vanoti ndivo Kristu (zvichireva vakazodzwa) izvi zvinovapa kuteverwa vanhu vachitenda mavari. Semuti wechipegani wakashongedzwa wekuna Jeremia chaputa 10 wakawana vazhinji vanoita nezvawo pakati pemaKristu apo wakapiwa zita rekuti muti wekisimusi (Christmas tree). Zvisinei nekuti izwi rekuti kisimusi harimo muBhaibheri. Zuva 25 Zvita harimo zvakare muBhaibheri.
JEREMIA 10:2 Regai kudzidza tsika dzamarudzi avanhu ...
3 Nokuti tsika dzavanhu hadzina maturo, nokuti umwe unotema muti mudondo...
4 vanoushongedza nesirivheri nendarama ...
5 zvakafanana nembiru dzakavezwa, dzisingatauri ...
Nhasi uno maKristu mazhinji ane muti (christ's tree) weKisimusi mudzimba nemuzvitoro zvavo.
ChiKristu chakashandurwa chikabva chawananiswa nechipegani. Hatingachiti chiKristu chehaibhuridhi asi tochiti chichechi-chechi (churchianity).
MATEO 24:6 Muchanzwa zvekurwa neguhu rekurwa. Chenjerai musavhunduswa nokuti izvozvo zvose zvinofanira kumboitwa asi kuguma kuchigere kusvika.
Ichi ndicho chisimbiso chechipiri. Nei zvakataurwa? Nekuti Jesu ari kutitaurira kuti kukanganisa kwakapinda sei muKereke uye kuti chakadzika midzi sei zvekuti vanhu havakwanisi kuramba. Chekutanga dzaive dzidziso dzisiri mumaGwaro dzinongova hunyengeri muchitendero. Zvino kukauya kereke yakapindira mune zvematongerwo enyika zvinopa Pope kukudzwa kwakawedzera. Izvi zvakamupa kuti akwanise kuwana mauto kubva mudzinyika kuti akwanise kuuraya vaipikisa chiCatholic. Zvematongerwo enyika zvinotongwa naSatani. Saka chokwadi chakatanga kufa.
Damasus Bhishopu weRoma kubva 366-384 akatora chinzvimbo chaPontifi. Izvi zakamupa kukudzwa kukuru pakati pemapegani sezvo aive nezita rakaipa pakati pemaKristu nekuti vateveri vake vaive vauraya vanhu vaisvika 100 kuitira kuti asarudzwe kuva Bhishopu weRoma.
Damasus, kuti awedzere mbiri yake pakati pemapegani akatambira tsika dzavo nekudziumbiridza zvishoma kuti dziite kunge chiKristu. Kutira kuti chiKristu chitambirike kumapegani, kereke yeRoman Catholic yakapfekedzera chipegani muchiKristu. Zuva rekuzvarwa kwamwari wezuva (sun god) musi wa 25 Zvita iro rakaiswa namambo Aurelian muna 274 AD rakabva raitwa zuva rekuzvarwa kweMwanakomana waMwari (Son of God).
Aurelian pachake aive muurayi mukuru wekereke yechiKristu. Chimwari Ishitar chakazvarwa kubva pazai murwizi rweEfuraiti. Ndicho chakazonzi Isita egi (Easter egg).
Bhishopu Siricius (384-399) ndiye akava Bhishopu wekutanga kuRoma kudaidzwa kuti Pope.
Madzimambo aishandisa mauto avo kusimbisa murairo unenge waiswa kana mutongo waBhishopu.
Makumi emamiriyoni evanhu vaive vasiri maCatholic vakaurayiwa mukati menguva yerima.
MATEO 24:7 Nokuti rudzi ruchamukira rudzi novushe huchamukira vushe:
(Hondo chikamu chemaberekerwo erudzi rwevanhu rwakaberekerwa muzvivi uye hondo dzezvitendero dzakaoma zvakapetwa nekuti kune vamwe vanhu vanofunga kuti vanokwanisa kubatira Mwari kupfurikidza kuuraya vamwe. Kereke yakapinda munezvematongerwo enyika ikatanga kuuraya vapikisi vayo.
(Chisimbiso chechitatu mutasvi webhiza dema achipima chingwa chehupenyu. Nekusadzidzisa vanhu kufamba vachitevera maGwaro, vanhu vari kuiswa panzara yeChokwadi saka nenzara yavo vanodya chero chekudya chiripo,chero chivi.)
Nekunge makereke azivisa ruponeso, totenda luther, yakabva yazadzwa nezvitendero zvisimo muBhaibheri. Chirairo kana kuti chidyo chaShe chave kudyiwa mangwanani sekunge chisvusvuro chaShe chemangwanani. Petro akati tendevukai mubhabhatidzwe. rubapatidzo rwevana vaduku rwakabva rwapindira zvisinei nekuti vana vaduku havazivi kutendeuka.
Masangano akavako, zvisinei nekuti hazvimo muMagwaro. Makereke ave munezvematongerwo enyika. Vanhu vanotungamira vakasimudzirwa mumakereke pamusoro pevamwe. Mutungamiriri mumwe nemumwe ane nzira dzake dzekutungamira nadzo uye kuita kwekupanduka kuri kuramba kuchiwanda kuchipatsanurana nekupatsanurana semufananidzo waDanieri wemuHedeni wakapatsanuka kuita makumbo maviri ukaramba uchipatsanuka kuita zvigunwe gumi. Makereke akazadzwa nemazano evanhu netsika asi zvinosuwisa kuti haana kukwanira kweMagwaro. Vanhu mumakereke vakatanga kuita nzara yechokwadi chemuBhaibheri.
Hondo dzisingaperi dzakatanga kukura kurutivi irworwo rwenyika saka nzara dzakabva dzavako.
(Chisimbiso chechina. Iyi ndiyo nguva yekereke yechinomwe yakatanga makore akapoteredza 1900. Hosha dzakaipa (dzinopararira pasi rese). Dzakafanana nehurwere hunoderedza munhu kuva mutumbi wakapfumburuka husati hwamuuraya. Chirwere chebubonic chinokonzerwa neinda kana makonzo neche black death chakauraya chikamu chimwechete kubva muzvina chevanhu vekuEurope. Chinoita kuti hutachiona huve hwakaipisisa (seAIDS neEbola) zvinokura uye kupararira kana hutachiona hwekutanga hwagadzirwa. AIDS yakapararira nepasi rese pasi rese kutanga kumakore a 1960 yauraya vanhu vanosvika 40 miriyoni kusvikira nhasi uno. Vanhu miriyoni nehafu vanofa nacho gore rega-rega.
Muna 1918 hutachiwana hwe dzihwa reSpanish hwakauraya pakati pevanhu 50 miriyoni kusvika 100 miriyoni pakati pemakore 1918-1920.
Paive nevanhu vaisvika mabhiriyoni maviri pasi rese muna 1918 pedyo nehafu yevanhu ivava vakabatira chirwere ichi.
Saka chisimbiso chechina chakazarura kereke yechinomwe nerufu rwakatora makore matatu rwakanyorwa munhoroondo kubva pahosha idzi. Bill Gates anoti kutya kukuru kuri maari, zvikonzero zvaanopira zvakanyanya, ndezvekuedza kudzivirira kupararira kwehutachiona hwakaipisisa.
Tsime rekukanganisa kukuru nhasi nderipi? Kutora Gwaro torigadzirisa kuti rifambirane netsika dzinotiitira, kunyanya kana dziri tsika dzechipegani. Semuenzaniso: Adamu naEva vakadya apura, chikara pachakataura naEva mumunda chaive nyoka,(nyoka haitauri kana kukakavara. Mhuka yakazoshandirwa kuita nyoka yaive chikara chepamusoro soro, yaive isiri nyoka inofamba nedumbu) Jesu akazvarwa musi wa 25 Zvita, zvakanaka kuramba nekuroorazve, Mwari iTiriniti, mufundisi ndiye musoro wekereke. Hapana chimwe pane izvi chakanyorwa muBhaibheri. Kungori kurasiswa pamweya kwakaipa nekuti zviri kupinda muvanhu zvokanganisa pfungwa dzevanhu zvekuti zvinovaomera kubvisa kutenda kwavo pazviri.)
nokudengenyeka kwenyika kunzvimbo zhinji.
Chimwe chezviratidzo zvenguva kudengenyeka kwenyika.kudengenyeka kwenyika nekudengenyeka kwepasi pegungwa kunokonzeresa matsunami parizvino ari kuitika zvakanyanyisa. Ichi chiratidzo chekuti tave pedyo pekusvika kumagumo. Kuva chiratidzo chekuguma tinokwanisa kuona kuti kudengenyeka uku kucharamba kuchienderera mberi nekuparadza kwako. Kudengenyeka kukuru pakuchaitika kuLos Angels, United States of America ichava panjodzi nekuti inyika huru ine chikamu chikuru chehupfumi pasi rese izvi zvinozoita kuti hupfumi hwedzimwe nyika hudonhewo nayo.
Muna 2014 kudengenyeka kwenyika kwakawedzera. Izvi zvingatsanangurwe sekurwadziwa kwekuzvara kwenyika apo nyika inorwadziwa pakuburitsa kutonga kwaJesu muMereniumu neMwenga wake.
Nzvimbo zhinji zvinoreva kuti nzvimbo dzakasiyana siyana. Tinoramba tichinzwa nezvekudengenyeka kwenyika munzvimbo dzakasiyana pasi pano.chiso chenyika chiri kuneta. Hatisisiri kurarama munzvimbo yakachengetedzeka. Nzvimbo dzemapuraneti dziri kutsikirirana saka kudengenyeka kwenyika kuri kuitika seyambiro kwatiri. Ishe vava padyo Kuuya.
MATEO 24:8 Asi zvinhu izvozvo zvichave kutanga kwenhamo.
Nekukasika Jesu akataridza kuti mutasvi webhiza rekukanganisa aive atora pfungwa dzemaKristu zvakaita sei. Kuna Zvakazarurwa 6:7 akanga asvika pavhesi rekutanga rechisimbiso chechina chinova nguva yeGondo uko kwatinofanira kugadzirira kukunda kukanganisa kuitira kuti tikwanire Kuuya kwaIshe. Saka nevhesi iri akatanga kupindura mubvunzo wechipiri:
chiratidzo chekuuya Kwenyu chichava chipiko?
Mhinduro yake yaiita seyaitaridza kuti hachisi chiratidzo chimwechete chakakosha asi kuchazove nezviratidzo zvakawanda zvenguva idzi.
Asi mamiriro ezvinhu nguva yeKuuya kweChipiri isati yasvika anotsanangurwa sekutanga kwenhamo. Saka zvinhu zvizhinji zvichakanganisika asi vanhu vasingazivi kuti chii chakanganisika. Kereke yedu yechinomwe ichanoperera munguva yeKutambudzika umo nhamo iyi ichatowedzera.
Saka Kereke yechinomwe ichapera mukuramba Chokwadi.
MATEO 24:9 Zvino vachakuisai kumadambudziko, vachakuurayai,
(maKristu ane kurovererwa kusingaperi. Nguva yeKereke yechinomwe yakatanga nekuuraiwa kukuru apo muna 1915 Ottoman Turks akatanga chirongwa chekuuraya maKristu nemaAmenian anodarika 1 miriyoni. Ndipo pakatangira shoko rekuti jenosaidhi. Nhasi munyika dzinodarika 40 maKristu achiri kusangana nekuuraiwa kunyanya nemaMosiremu apo vanhu vanosvika 180 vanofa nekuda kwekutenda kwavo mwedzi wega-wega. MaIsilamisti nema ekisitrimisiti akaita seISIS vari kuramba vachiuraya maKristu kuIraq neSyria.)
Vanhu vanotenda kuMharidzo vanomhura vaya vasingatenderani navo. Munguva yekutevera zvakabatwa zvichitaurwa nevanhu vanosvora vanoda havo kutevera Bhaibheri. Vanhu havachauraiwa panyama asi kuuraiwa kwehunhu hwevanhu ndiko kwakunyatsoshanda.
muchavengwa namarudzi ese nekuda kwezita rangu.
rubapatidzo muzita raJesu runorairwa naPetro kuna Mabasa avaapostora 2:38 runosangana nekurambwa kukuru mumakereke mazhinji. Taura kuti zita raJesu Kristu ndiro zita raMwari unobva waona kuti vanotevera Tiriniti havazodi kukuona zvakare.
11 vaporofita vazhinji venhema vachamuka vachitsausa vazhinji.
MaKristu vanovenga vanhu vanoshandisa Magwaro kuvapikisa. Havana chekuita navo. Vaparidzi vanorunga zvavakanzwa zvichitaurwa vozvinatsa pachinzvimbo chekutsigira zvavanotaura neBhaibheri. Vanhu vanotevera hutungamiri hwevanhu nekuti vane husimbe hwekushanda nesimba kuzvitsagira chokwadi chezvavanotenda vega kubva muBhaibheri.
12 Rudo rwavazhinji ruchatonhora nokuti kusarurama kuchawanda.
Nekuti vanhu vakawanda vanoita zvakaipa (sekurarama muzvivi nekupfeka nguvo dzinoratidza miviri yavo uye dzenyika ino) vanhu vanongoti zvakanaka.
Kutadza nebwoni zvinoreva kuita chinhu vanhu vachinyatsoziva kuti chakaipa asi vochiita zvakadaro.
Vanhu vanotenda kudzidziso dzinobva pane zvavakabata zvichitaurwa nevanhu zvishomanana. Izvi zvinobva zvagamuchirwa neruzhinji. Saka munhu anoda kutsigira dzidziso nekubatanidza mavhesi emuBhaibheri anobva arambwa neruzhinji.vanoziva kuti kuramba munhu nekuda kwekuti atsvaga chokwadi kubva muBhaibheri zvakaipa, asi vanozviita chete nekuti vakadaro vanobva varamba vari muhutefe-tefe hwerutsigiro runobva mumakereke avo. Izvi zviri nyore kukunda kuedza kuverenga Bhaibheri nekuita basa rakaoma rekutsigira dzidziso kubva mariri.
13 Asi unotsungirira kusvika pakuguma, uchaponeswa.
Kuponeswa kubva kunguva yeKutambudzika. Asi tinofanira kutsungirira. Kutsungirira mumatambudziko. Hakuna nzira iri nyore kana ine magarikwa.
MATEO 24:14 Evangeri iyi yovushe ichaparidzwa nyika dzese chive chapupu kumarudzi ose, ipapo kumagumo kuchasvika.
Evangeri rinofanira kusvika kumarudzi ese epasi rino. Mamishinari akabata basa guru. Zvivhiti-vhiti nemawairesi zvakaenda pamhepo. Iyezvino nhau dzakukwanisa kuparidzwa uye vanhu kusanganiswa totenda intaneti.
Intaneti yakazarura pasi rese kuti risangane neEvangeri. Chero munhu ane mbozhanhare, kwane mabhiriyoni adzo, anokwanisa kuverenga chokwadi pamawebhisaiti kunyangwe pasina mumwe munhu ari panzvimbo yaari ane chido chekudzidza Bhaibheri.
“Ipapo kuguma kuchasvika”.
Izvi zvinodaira mubvunzo Wechitatu.
Chisimbiso chechina chine mavhesi maviri. Rekutanga rinotaura nezvenguva yeGondo iyo inotiratidza chinhu chatinofanira kuziva kuti tipunyuke nguva yeKutambudzika. Vhesi rechipiri rinoratidza rufu ruchiuya kuzokonzeresa Kutambudzika kukuru. Saka maKristu mazhinji achawanikwa ari muKutabudzika kusara kwevashoma vachateerera kurudziro yeGondo.
Kuguma apa kunoita sekuguma kwenguva yekereke yechinomwe sezvo nguva yechinomwe inoshanduka kuita nguva yeKutambudzika kukuru. Kutambudzika kunozopererawo muhondo yeAmagedhoni.
Mumavhesi 6 ekupedzisira Jesu anotsanangura kuoma kwazvakaita kuti uve uri muKristu anotevera nekurarama kupfurikidza Bhaibheri mukusungikana kwechichechi-chechi chemasangano. Anonongedzera kumwe kwekukanganisa kukuru kwatinofanira kudzivirira kuti tigokwanisa kupunyuka kubva muKutabudzika.
Iyezvino, nekunge maKristu ayambirwa kudzivirira Kutambudzika kukuru, Jesu anodzokera pakuparadzwa kweTemberi kunopa nzira kumaJuda kuti vangaitei kuti vapunyukewo kubva kuKutambudzika kwaiizovawira kana maRoma azoparadza Temberi yavo. Ichava nguva yakaipa kwazvo kwavari saka akavapa mazano akanakisa.
MATEO 24:15 Naizvozvo kana muchiona nyangadzi yekuparadza yakarehwa nemuporofita Danieri imire panzvimbo tsvene (unorava ngaacherechedze).
Nhasi Mosiki yaOmar imire panzvimbo yeTemberi. Jesu anoiti nyangadzi yekuparadza.
Asi kare maMosiremu asati atora nzvimbo kuiita yavo, maRoma aivewo ipapo. Vakapisa Temberi vakaparadzanisa ibwe rimwe nerimwe raive rakavakisa Temberi. Saka Roma ndiyo zvakare nyangadzi yekuparadza yakasiya nzvimbo yeTemberi yakaparadzwa (chimwe chinoreva kuparadza ndechekuti irwendo rwusina kwarwunoenda. Zvishoma zvinoparadza kupinda kufunga kuti uri munzira yekuenda kudenga wozoona wava pamberi kuti hakusiriiko kwauri kuenda. Saka dzidziso dzeKereke yeRoman Catholic dzigere pakupira nezvitendero zvechipegani (Babironi yakavanzika) dzakaparadza kutenda kwevateveri vavo sezvo vanovavimbisa zvinhu zvisipo sekunamata kuna Maria kana kuripira mari kuti vakafa vatadza vabve kunzvimbo yekurindira gehena vaende kudenga).
“Imire panzvimbo tsvene,(unorava ngaacherechedze).
Chii chatinofanira kucherechedza?
Mwari ega ndiye Mutsvene. Paaive achiri muTemberi yaive ichiri nzvimbo tsvene. Huvepo hwake hwakaita kuti Jerusarema rive guta dzvene. Asi Mwari akabva muTemberi pakafa Jesu chidzitiro chenzvimbo tsvene dzehutsvene chikabvaruka. Ndipo pakaparadzwa Temberi nemaRoma. Saka tinofanira kunzwisisa kuti
Temberi ndiyo yaive nzvimbo tsvene apo Jesu aitaura navo, asika yaizoparadzwa uye Mwari haaizogara mairi zvakare. Saka hayaizoramba ichidaidzwa kunzi nzvimbo tsvene. Pazuva rePentecosti Mwari akaburuka kuzogara mumoyo yevanhu. Saka zvino vave vanhu vatsvene, kana Mwari ari mavari, asi hakusisina inonzi nzvimbo tsvene.
Asi kune chimwe chinhu chatinofanira kunzwisisa.
M aRoma asati apamba Jerusarema asati aparadza Temberi, yakanga yatorwa yasvibiswa nemaJuda echiziroti nebhavha dzaive dzisingatenderwi zvichibva pamurairo kupinda mairi. Vanhuwo zvavo vaitya kupinda muTemberi. Saka mazirotivakaishandisa senzvimbo yakachengetedzeka yekubira nekuurayira vanhuwo zvavo vechiJuda. Vakauraya muprista mukuru. Vanhu vakatanga kutiza nekuti maziroti akatanga kurindira nzira dzese dzemuJerusarema, vachiuraya vese vaiedza kubuda. Hondo dzemaziroti dzakatenderedza guta kuti vabate vese vaiedza kubuda muguta. Saka maziroti echiJuda ndiwo akatanga kusvibisa Temberi. Vakaparadza nekuinyangadza pamweya, maRoma asati amboputsa masvingo eguta akaparadza Temberi. Vachiparadza mudhuri wayo. Saka maziroti ndivo vakatanga kuva nyangadzi dzekuparadza nekusvibisa Temberi yavaive vasingatenderwi kupinda mairi. MaRoma akazotorawo mukombe pavakaparadza Temberi muna 70 AD uye, pakazopera hondo yeBar Kokhba muna 136 AD, vakavaka temberi yechipegani vachivakira Jupita Capitolinus panzvimbko yetemberi. MaMosiremu akabva atora mukombe uyu pavakapamba Jerusarema muna 638 AD zvino hondo yemaRudzi emaMosiremu nemaMosiremu kuSiria yakatanga muna 2011 yakazonyatsosiyawo yaparadza nekunyangadza zvakanyanya sezviri pamufananidzo uri pasi. Vachiri kuzadzisa rutivi rwavo rwechiporofita chakaitwa, vachiparadza asi vachiti vanerunyararo.
MATEO 24:16 Zvino vari muJudia ngavatizire kumakomo
17 Uri pamusoro pedenga reimba ngaarege kuburuka kuzotora zviri mumba make.
18 Nouri kumunda ngaarege kudzokera shure kuzotora nguvo yake.
19 Vachava nenhamo vane mimba navanomwisa namazuva iwayo.
20 Nyengeterai kuti kutiza kwenyu kurege kuva muchando kana muSabata.
MaJuda aive asingatenderwi kufamba nzendo musi weSabata kana kuti Mugovera. Nguva yechando kwavari inguva yaichena chando. Saka zvinoreva kuti Jesu akana kuzvarwa pakati penguva yechando musi wa25 Zvita nekuti vafudzi havaibuda nemapoka avo manheru chando chichichena nekuvaomesa.
Yaive nguva yakaoma. Muna 66 AD maRoma vakarwisa Paresitina. Vakavharira Jerusarema asi mambo Nero akabva afa muna 68 AD. Vespesian aifanira kumira kurwa kusvikira apihwa mvumo namambo mutsva Galba aive asina chaaiziva pamusoro peParesitina akasadaira chichemo chaVespasian chekukumbira mvumo kuti arwise. Galba akaurayiwa mumashure memwedzi minomwe. Mambo akamutevera Ortho akangogara kwemwedzi mitatu maRoma haana chaakaita muParesitina panguva iyi.
Nguva iyoyo maziroti aigara muTemberi, vachiuraya nekuparadza guta vasina wavaitendera kubuda muguta. MaRoma aizomira kwenguva inoda kukwana gore nehafu vasati varwisa Jerusarema.
Madzimambo matatu akagara pachigaro mumashure maNero mumwe nemumwe wavo akavapo kwemwedzi inoverengeka. Kwekupedzisira mauto ake akaita Vespesian mambo Muna 70 AD akaenda kuRoma kunotora chinzvimbo chake samambo akasiya mwanakomana wake kuti apedze neJerusarema. Saka maRoma akasimuka kunorwisa Jerusarema zvakare vakavawana vamire zvekuti vakazosarudza kuvauraya nenzara kuti vakande mapfumo pasi.
Pavakaona maRoma achiuya muna 68 AD, maKristu mazhinji akarangarira zvakarehwa naJesu vakatiza kubva muguta. MaRoma havana zvavakaita nekuti Nero aive afa.asi maziroti akavhara guta kuti vanhu vese vasabude. Dai vanhu vaive vasina kutiza nekukasika, vangadai vakaparadzwa vese. Muna 70 AD maRoma akadzoka. Maziroti akabva aramba ari mukati memasvingo eguta maive nenzvimbo shoma dzavaikwanisa kuzotiza nadzo vachibuda muguta umu. Saka maRoma nekukasika vakavaka masvingo akapoteredza guta. Mushure maizvozvo hapana muJuda aikwanisa kupunyuka. MaJuda aisvika 1 100 000 akafa mukuita uku.
Kuparadzwa kweJerusarema kwaive kumwe kwekuuraiwa kwevanhu kwakaita mbiri munhoroondo. Pahondo yaStalinggrad muhondo yepasi rese yechipiri vanhu vekuRussia vanosvika 1 200 000 vakafa. Handizivi nezverimwe guta rine huwandu hwevanhu vakafa kubvira pakuuraiwa kwevanhu muJerusarema. Saka maJuda akatanga chisimbiso chechishanu nekutambudzika kwerudzi rwavo kwairwadza kwazvo kwegore ra 70 AD nekuti vaive varamba Mesiah.Zvino mumashure memakore anoda kukwana 2 000, maJuda achadzoka kuShoko votambira Mesiah munguva yeKutambudzika kukuru.
MATEO 24:21 Nekuti nenguva iyoyo kuchava nekutambudzika kukuru, kusati kwakambovapo kwakadaro kubva pakutanga kwenyika kusvikira zvino vuye hakuchazovipo.
Nguva yeKutambudzika kukuru ndeyamaJuda kuti vadzoke uye vagamuchire Jesu. Haakwanisi kuyambira maJuda kuti angapunyuka sei paKutambudzika kukuru nekuti vanotoda marwadzo enguva yeKutambudzika nesimba remaporofita makuru maviri vanogona kushanda nemamiriro ezvinhu, kuti vavadzose kuna Jesu.
Saka Jesu adzoka zvakare pana Zvakazarurwa 6:7 iyi ndiyo kereke yechinomwe inoitika mukati mechisimbiso chechina, tisati tasvika panguva yeKutambudzika iyo inopedzisa chisimbiso chechina.
MATEO 24:22 Dai mazuva iwayo aisatapudzwa hakuna nyama yairarama asi nekuda kwavasanangurwa achatapudzwa.
Ikozvino zvaataura nezvenguva yekutambudzika kukuru, Jesu anotiyambira zvakare kuti tingagadzirira sei kuti tiipunyuke. Akaudza maJuda kuti aizopunyuka sei mukuuraiwa kwairwadza kwegore 70 AD. Izvozvi ave kuudza isu kuti tingapunyuka sei kuuraiwa kunorwadza kwenguva yeKutambudzika.
Zvinhu zvichaipisisa kukanganisa kuchawedzera zekuti kwekupedzisira zvinenge zvaoma kuva muKristu anotevera Bhaibheri. Kusvika pana 2017 pakange patove nemasangano emakereke akasiyana-siyana anosvika 45 000. Pane mazana emaBhaibheri akaturikirwa ese anoreva zvakasiyana. Makereke ari kutongwa nevafundisi venyama nekudaro vanoisirwa miganhu kupfurikidza kukanganisa kwemufundisi wavo.
Saka munhu angasangane sei neChokwadi? Zviri kuramba zvichioma nekuoma. Chikamu chechokwadi chinenge chawanikwa nemunhu chinorambwa zvakasimba mumasangano. Vanotenda kuMharidzo havazodzokere kunotarisa kuti Bhaibheri riri kuti kudi asi vanongotora zvataurwa vozvirukanisa voita zvavo zvakajeka zvavanotenda mazviri kuzviita kunge Chokwadi. Vanobva vatanga kugadzirisa William Branham voisa zvaakataura pamusoro pemagwaro. Vanobva vati haatadzi uye haapotse. Izvi ndizvo zvimwechete zviotaurwa nemaRoman Catholic pamusoro paPope wavo. Kereke yega-yega kana sangano, rinova muchitsuwa charo rega uye haridi rubatsiro kubva kunze kwaro. Sangano rega-rega rinofunga kuti iro rega ndiro rine chokwadi zvekuti, haringadi chiro kubva kune vekunze.
Saka kwekupedzisira mutendi mutsva haazokwanisi kuwana Chokwadi chinova icho chega chingakwanise kumupunyutsa kubva kunguva yeKutambudzika kukuru. Saka Mwari anofanirwa kugurira nguva yekereke yatiri kurarama tiri kuitira kuti kuwanikwe kuchiri nevanoda kutenda nekutevera Bhaibheri vasinganyengedzwi nemazano evanhu kana nechero mufundisi zvake semusoro wekereke. Asi hakusisina vazhinji vevanhu ava panyika.
VAEFESO 5:23 Nokuti murume musoro wemukadzi, saKristu vo musoro wekereke;
Saka hakuna mufundisi, bhishopu kana Pope angazviti ndiye musoro wekereke.
MATEO 24:23 Zvino kana munhu akati kwamuri, tarira Kristu uri pano kana apo, regai kutenda.
Vanhu vachati Kristu auya. Musatende mune izvi. Hakuna nzvimbo yamunokwanisa kuenda kunosangana naKristu. Jesu anofara kugara mumoyo yevanhu kupi nekupi kwavangave vari. Kana muchitenda Jesu achauya kwamuri sekuuya kwaakaita kuna Johane mubhabhatidzi achibva azoenda kunotsvaga vadzidzi kwese kwavaive.
24 Nokuti vachamuka vanaKristu venhema vacharatidza zviratidzo zvikuru zvinoshamisa kuti kana zvichibvira vatsause navasanangurwavo.
VanaKristu venhema. Vakazodzwa venhema kumagumo. Kuzodzwa kuri mavari ndekwazvokwadi asi mbeu iri mavari haisi Shoko raMwari zvipo nekudanwa pamabasa hakushandurwi.
Saka kuita minana mikuru hazvirevi chinhu kunze kwekunge munhu aramba ari mumaGwaro. Tarisa zvaunonzwa kuti zvinoenderana nemaGwaro here, nekuti unonyengerwa. Fananidza zvese zvaunotenda neBhaibheri, usangozviyananisa nemaShoko mashomanene wototi zvaita.
Takayambirwa kuzvinhu zikuru zvichatsausa vazhinji.
26 zvino kana vakati kwamuri, tarirai uri kurenje regai kubuda. Tarirai, uri mudzimba dzomukati, regai kutenda.
Gore guru rakaonekwa muna 1963 rakaonekwa pamusoro penzvimbo dzemarenje pamusoro peFlagstaff kumawodzanyemba kweArizona. Musatenda kuti uku kwaive Kuuya kwaShe.
“Nzvimbo dzakavanda” mharidzo yechiParousia. Vanoti Jesu akauya ari munzvimbo dzakavanda nenzira dzekuti huvepo hwake hunoonekwa kupfurikidza nesu.
Kereke yeSavada inaye “munzvimbo dzakavanda”. Vanofunga kuti akauya kare muna 1844. Musatende mune zvese izvi. Kana achiuya anenge achiri nemuviri watinoona une mavanga ezvipikiri mumavoko ake.
27 Nokuti semheni inobva kumabvazuva ichipenyera kumavirira ndizvo zvichaita kuuya kweMwanakomana wemunhu.
Evangeri rakatangira kuParestina mumashure menguva yerima rikayambukira kuna Luther kuGermany rikazoenda kuna Wesley kuIngirendi zvino kuPentecosti naWilliam Branham kuAmerica. Saka chiedza cheShoko chakafamba chichienda nenyika kubva kumabvazuva kuenda kumadokero apo nguva yemakereke imwe neimwe yaitambanudza chokwadi chakawedzera. Mwanakomana wemunhu ndiJesu uye ndiye Shoko RaMwari. Saka zaruriro yeShoko (chiedza) yakafamba kubva kumabvazuva kuenda kumadokero. Luther akatidzidzisa kutendeuka, Wesley akatidzidzisa hutsvene nekuparidzira Shoko kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Pentecosti yakabereka rubapatidzo rweMweya Mutsvene, william Branham akatidzosera kudzidziso dzemaGwaro dzekereke yekutanga. Apo chiedza cheBhaibheri chaifamba nenyika chaizoramba chichijeka kusvikira tave kukwanisa kuona Jesu seMwanakomana wemunhu achifamba nemumapeji eShoko.
Mwari akava munhu. Ndiye ega munhu anoziva kuva musoro wekereke.
Jesu ndiye ega munhu watinofanira kutevera.
Muchiedza chake, vamwe vatungamiriri vese vanonyangarika senyeredzi dzinonyangarika panodzoka zuva.
Kana uri muchiedza cheMwanakomana wemunhu, haungakwanisi kutevera umwewo munhu. Kana uchiri kutevera munhu uchiri kufamba murima.
MATEO 24:28 Apo pano mutumbi ndipo pachaunganira magora.
Magora anoda nyama isati yashata. Kereke inoroverera Kristu pamaronda manyoro nekuda kwezvinyakare zvavo vachiramba Shoko raMwari ravanotambanudzirwa. Asi Shoko rakarambwa iri ndiro rinokwezva magora nekuti Mwari akaapa maonero akadzama ekunzwisisa maGwaro.
Aya ndiwo mamiriro ezvinhu mukati mehafu yekutanga yechisimbiso chechina. Ndiko kukanganisa kwatinofanira kumira tichirwisa. Zvino Kutambudzika kukuru kotevera pakupera kwenguva yekereke yechinomwe rufu rwotora chinzvimbo.
MATEO 24:29 Pakarepo shure kwokutambudzika (kutambudzika kukuru kwenguva yehondo yaEichman apo kwakafa maJuda 6 miriyoni muhondo yepasi rese yechipiri) kwemazuva iwayo,( chikamu ichocho chechisimbiso chechishanu chinomiririra kutambudzwa kwemaJuda) zuva richasviba, nomwedzi hauchazobwinyi. Nyeredzi dzichawa kudenga namasimba okudenga achazununguswa. (Iyi ndiyo ichava nguva yekutambudzia kukuru, chisimbiso chechitanhatu, sezvo ichave shanduko yakazara yemamiriro ezvinhu kubva pamaberekerwo azvo.)
Hondo yeNazi yaive chiratidzo chezvichaitika munguva yeKutambudzika kukuru iyo ichave nekuuraiwa kwakanyana nekuti mamiriro ezvinhu panyika achange ashanduka. Hondo iyi yaive yakakosha nekuda kwei? Marudzi aive akavenga Israeri. Kusanganisira maKristu aive akarasiswa paaiudzwa pamusoro pavo. Asi kuita kwegasi raHitira kwaive kwakaipisisa zvekuti mamwe marudzi akanzwira Israeri tsitsi nesarudzo imwe, chibvumirano chakaitwa mumubatanidzwa wenyika dzepasi rese kuti Isiraeri ipiwe nyika yayo inova musha wayo muna 1948. saka maIsraeri akadzoka kumusha kwawo kuIsraeri pekupedzisira. Izvi zvakagadzira nhandare yekudzoka kwaJesu kumaJuda muKutambudzika kukuru. Zuva, mwedzi nenyeredzi hazvizodzoreki kana kugadzikika zvinoreva kuti Mwari achashandura mamiriro ezvinhu panyika achishandisa simba rake ratisingakwanisi kutsanangura kuchengetedza Israeri. Kutambudzika kwekutanga kwehondo waive muripo wakaoma waifanira kuripirwa nemaJuda kuti vakwanise kudzoserwa nyika yavo.
Ipapo ipapo vhesi rakabva raenda kunguva yekutambudzika. Chikonzero nei maJuda akadzoserwa nyika yavo chaive chekuti vaizodzoswa kuMuponesi wavo munguva yekutambudzika.
Nguva yekutambudzika ichange yakaomarara zvekuti maJuda achaona kuti haana zvimwe zvekuita. Ipapo Jesu anosvika kuzovaponesa. Vachafadzwa nesimba rake rinoshamisa, pavanenge vapererwa nemazano vasisazivi zvekuita, zvekuti zvichazovamanikidza kubvuma kuti ndiye Muponesi.
“Masimba edenga achazununguswa”.
Kushandurwa kwemamiriro ezvinhu kunoshamisa. Zvinhu zvichatikurira zvatisingakwanisi kutsanangura. Humbowo hwekuti Mwari ari kupindira zvinoshamisa zvatisingakwanisi kutsanangura kuti hurongwa hwake huzadziswe.
Nhanho yemaJuda yekupedzisira yaive apo vakadzokera munyika mavo totenda hondo yegasi yakatora nzvimbo panguva yaEichman.
Parizvino Kereke yechokwadi yave kufanira kutanga gadziriro yekuti vapunyuke kunguva yeKutambudzika kukuru.
Zvakare Mwari achashandura mamiriro ezvinhu panyika sechiratidzo kuMwenga. Chichava chiitiko chatisingakwanisi kutsanangura chiri pamusoro pedu chatisingagoni kudzora.
MARAKI 4:4 Rangarirai murairo waMosesi muranda wangu, wandakamuraira paHorebhi, wavaIsiraeri, vose, izvo zvandakatema nezvandakaraira.
5 Tarirai ndichakutumirai muporofita Eria, zuva iro guru raJehova, riotyisa, risati rasvika.
Hama Branham akauya saEria kuzopikisa mweya waJezebheri weKereke inotonga uye inouraya, Roman Catholic. Aivepo kuti atendeutsire moyo yedu kukereke yekutanga.
Tingamuteerere sei ? Rangarirai Mosesi.
Mosesi akaona moto muchikwenzi. Gwenzi harina kutsva kutaridza kuti waive usiri motowo zvawo waive Mweya Mutsvene. Chiratidzo ichi chaive musanganiswa wezviripo panyika (gwenzi) uye zvemweya (moto). Saka William Branham akapiwawo chiratidzo chaisanganisa zviripo uye zvemweya.
Musi wa 28 Kukadzi 1963 roketi reThor raibva pabhesi remauto rekuVandenburg rakaputika pachinhambwe chaiita mamaira 27 kubva panzvimbo iri pedyo negungwa kuCalifonia. Denderedzwa rakaita gore rechiutsi rakaitwa rikapepereka rakananga kumakomo eSunset. Denderedzwa regore iri rakapararira zvishoma nezvishoma sezvinongoita mamwe erudzi urwu. Asi rimwe gore rechipiri rakaitwa zvakare mamaira aisvika 20 kubva pane iri. Gore iri raive guru nechinhabwe kana tichiverenga tichiritenderera chinosvika mamaira 150. harina kupararira uye hapana vezvesainzi vakakwanisa kutsanangura kuti rakakonzerwa nei, nekuti roketi rinoputika rinongoita denderedzwa rimwechete rechiutsi. Saka raifanirwa kuva remweya mutsvene nekuti rakazunungutsa mirairo yedu inozivikanwa yezveongororo dzezvemuchadenga idzo dzaisakwanisa kutsanangura gore pachinhambwe charaive paive pasina mukana wekuti pangagadzane mvura yemuchadenga kuti iite gore.
“Namasimba emuchadenga achazununguswa”.
Gore iri rakaitwa nevatumwa vanomwe rikaenda kunzvimbo uko, nguva ingangoite svondo yakazotevera, William Branham aizogamuchira murairo kubva kuvatumwa vanomwe ava kuti azarure zaruriro yezvisimbiso zvinomwe kutambanudzwa kweMagwaro uku kwaizogadzira nhandare yekuti Mwenga akwanise kugadzirira Kuuya kweChipiri kwaJesu. Kana zvisimbiso zvinomwe zvazarurwa. Zvaive zvakafanana nekuvhura zipi. Pasina nguva refu zvizhinji zvezvakavanzika izvi zvakazarurwa zvikaratidzwa kuMwenga. Kubviswa kwekusaziva kwaari kwaizomubatsira kuti ave akagadzirira pakuenda kudenga kwekereke. Saka zvikwata zvese zviri zviviri, Mwenga uye maJuda vachange vakagadzirira kuti vasvike pakupedzisa kuverenga mazuva asara.
MATEO 24:30 Ipapo chiratidzo cheMwanakomana wemunhu chichaonekwa kudenga, (gore guru rakaonekwa mudenga muna 1963 ndiro chiratidzo cheMwanakomana wemunhu mudenga.harina kubvira rakwanisa kutorwa mifananidzo yaro pachinhambwe chaive pasi pemamaira 27) zvino marudzi ose achachema achiona Mwanakomana wemunhu achiuya pamusoro pamakore ekudenga nesimba nekubwinya kukuru.
Kuzarurwa kwezvisimbiso zvinomwe kwakaratidza zvaidiwa neMwenga kuti ave akagadzirira zuva rinouya Mwari. Anokwira kudenga muchiitiko chakavanzika chisina kutaurwa pano nokuti chinofanira kuva chakavanzika. Mwenga anokwira kudenga Shoko robva radzokera kumaJuda panotanga kutambudzika kukuru. 144 000 vanogamuchira Jesu vouraiwa. Ipapo ndipo panozouya Jesu kechitatu paAmagedhoni.
Iyezvino chiitiko ichi chave cheKuuya kwechitatu kwaJesu pakupera kwenguva yekutambudzika. Antikristu aparadza vasikana vashanu vakapusa akauraya maJuda 144 000. Saka Jesu paanouya kuhondo yeAmagedhoni, vateveri vaAntiKristu vese vanoziva kuti vave panjodzi. Hapana anofara kuona Ishe vachiuya zvichireva kuti Antikristu akauraya maKristu ese akapinda panguva yekutambudzika. Saka iva nechokwadi chekuti hauzowanikwi uri munguva yekutambudzika kukuru.
MATEO 24:31 Uchatuma vatumwa vake nehwamanda huru. Vachaunganidza vasanangurwa vake kunobva mhepo ina kubva kurutivi rumwe rwedenga kusvika kune rumwe rutivi.
Vatumwa, muhuwandu. Mosesi naEria. Vachatumwa kunoburitsa maJuda 144 000 avo vachadzoka kuna Kristu panguva yekutambudzika. Mhepo dzinotaura hondo nekushungurudzika mukati menguva yekutambudzika. Ava ndivo vakazvarwa patsva vedenga munguva yekutambudzika. Ichi chisimbiso chechitanhatu.
Parizvino tinofanira kunzwa nezvechisimbiso chechinomwe.
MATEO 24:32 Dzidza pamuwonde mufananidzo wawo. Kana davi rawo rava nyoro, mashizha achitunga munoziva kuti zhezha rava pedyo.
Asi Jesu akashandura nyaya apa.
Nekusataura nezvechisimbiso chechinomwe anoratidza pachena kuti ichi ndicho chakavanzika zvakazara chaicho chatisina zvatinoziva nezvacho. Munhu kuda kuedza kutsvaga zuva chairo richauya Mwari kutambisa nguva, muwonde chiratidzo cheIsraeri. Kana Israeri ikava nyika, ndicho chiratidzo chikuru chenguva.
Vanhu vakaita Israeri nyika muna 1948.
Pakati pedu hapana anoziva kuti Mwari akaita Israiri nyika yakazvimiririra riini.
Asi parizvino maIsraeri ave munyika yawo yechiberekerwo, ndicho chiratidzo chikuru chekuti Kuuya Kwake kwaswedera.
Chiratidzo ichi chikamu chemhinduro yemubvunzo wechipiri pavakabvunza zviratidzo zveKuuya Kwake.
MATEO 24:33 Saizvozvo nemivo kana movona izvozvo zvese zivai kuti wava pedyo pamukova.
34 Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, rudzi urwu harwungatongo-pfuuri kusvikira izvozvo zvose zvaitika.
35 Denga nenyika zvichapfuura asi mashoko angu haangatongopfuvuri.
MATEO 24:36 Asi kana riri zuva iro nenguva iyo hapana unozviziva, kunyangwe vatumwa vekudenga kunyange Mwanakomana asi Baba vega.
Kutaurwa kune kukasika kwechisimbiso chechinomwe. Kuuya KweChipiri kwaShe. Hakuna munhu anoziva kuti zvichave riini.
MATEO 24:37 Sapamazuva aNoa ndizvo zvichaita kuuya kweMwanakomana wemunhu.
38 Nokuti sepamazuva iwayo mvura zhinji isati yasvika, vaidya nokunwa, nokuwana nokuwaniswa kusvikira zuva Noa raakapinda naro muareka.
39 Vasingazivi kusvikira mvura zhinji yauya ikavabvisa vose,ndozvichaita kuvuya kwoMwanakomana womunhu.
Tadzoka kunguva yekereke yechinomwe Mwari asati auya uye nguva yekutambudzika isati yasvika.
Sekumazuva aNoa, vanhu varikukoshesa kuzvifadza muhupenyu. Kukosha kukuru kwaive pawanano. Vanhu vanowanana voita vana. Muna 2015 kune vanhu vanosvika 7 biriyoni panyika. Pamakore gumi namaviri ega-ega tinowedzera vamwe biriyoni panyika. Saka zvakadaro nesuwo tirikukoshesa wanano zvakanyanya. Chimwe chiratidzo chenguva zvakare.
MATEO 24:40 Nenguva iyo; vaviri vachava mumunda mumwe uchatorwa mumwe akasiiwa.
41 Vakadzi vaviri vachakuya paguyo rimwe mumwe uchatorwa mumwe akasiiwa.
Kukwira kudenga paKuuya kwaMwari chinhu chemunhu mumwe nemumwe. Mwari anotora uyo akagadzirira. Mumwe aive mumunda (achishandira Mwari) umwe aikuya zviyo ( kuita kuti zvakavanzika zveBhaibheri zvitambanudzike kuitira kuti zvipiwe kuvanhu sechingwa chehupenyu) aya ndiwo mamiriro ezvinhu muchisimbiso chechina pamagumo enguva yekereke yechinomwe. Ndipo Mwenga anofamba achipinda muchisimbiso chechinomwe, Kuuya kwaMwari.
42 Rindai naizvozvo nokuti hamuzivi nguva ishe wenyu yaanouya nayo.
Zvakare anotiyeuchidza chakavanzika chechisimbiso chechinomwe.
MATEO 24:43 Asi zivai izvi kuti mwene weimba dai aiziva nguva yekusvika kwembavha ungadai airindira akasatendera kuti imba yake ipazwe.
Tinofanirwa kugara takarindira, tichitarisisa dzidziso yedu yese mumaGwaro. Tinofanira kuva nehunhu hwekurindira nekutarisisa, kwete kuita kwekuvarairwa kwekuti hatingadi chiro.
Hunhu hwekubvuma kuti tinokwanisa kuva takarasika uye tobvuma kugadziriswa uye tozvipira kudzidza zvitsva.
Kana tikataridzwa kuti tanga takarasika totenda kugadziriswa ikoko, kwete kutsamwa kana kunzwa kudzikisirwa.
MATEO 24:44 Naizvozvo nemivo garai makazvigadzirira nokuti Mwanakomana womunhu uchauya nenguva yamusingamutariri.
Zvakare tayeuchidzwa nezvekuvanzika kwakaita chisimbiso chechinomwe.
MATEO 24:45 Ndianiko muranda akatendeka, akangwara, wakagadzwa nashe wake kuti ave mutariri weimba kuti avape zvekudya nenguva yakafanira?
46 Wakaropafadzwa muranda uyo anoti kana She wake achisvika akamuwana achiita saizvozvo.
47 Zvirokwazvo ndinoti kwamuri uchamugadza kuti ave mutariri wazvose zvaanazvo.
Nguva yedu yeGondo ndeyekubata zaruriro yedzidziso kana mharidzo kubva kushoko rakaparidzwa naWilliam Branham toshingirira kumafananidza nemaGwaro. Tinofanira kuzokwanisa kutsigira dzidziso iyi kubva mumaGwaro, tisingadzokeri kumashoko atakabata William Branham achitaura.
MATEO 24:48 Asi kana muranda uyo akaipa akataura mumoyo make achiti Ishe wangu wanonoka kuvuya.
49 Akatanga kurova vamwe varanda vanobata pamwechete naye, akadya, akanwa pamwechete navakabatwa.
Mhombwe huru yekuna Zvakazarurwa 17 yakabatwa newaini. Saka vafundisi veshoko vemumasangano vanonwa komichi yesangano reRoma vozviti ndivo vanotonga kereke. Vanoti ndivo misoro yemakereke avanotungamirira semaprista eCatholic anoti ndiwo misoro yemakereke avo. Vanotonga vanhu zvine hasha vanotuka hupikisi hwese kuitira kuti vabatirire vanhu kuti vaite kuda kwavo nekutevera zvavanoda kuti vatende mazviri.
MATEO 24:50 Ishe wemuranda uyu uchasvika nezuva raasingamutariri nenguva yaasigazivi.
Zvakare tayeuchidzwa kuvanzika kwakaita chisimbiso chechinomwe.
MATEO 24:51 Akamurovesa kwazvo, akamupa mugove wake pamwechete navanyengeri apo pachava nokuchema nokugeda-geda kwameno.
Vafundisi vanoda kwazvo kutonga. Vanotonga kereke. Vanopa vanhu miganhu zvichienderana neruzivo rwavo ivo zvekuti pane zvavasingazivi sangano rese rinenge rakasungwa mbira dzakondo kuti vasazive kusaziva kwamufundisi. Vatungamiriri vane kutonga vachapedzisira vari munguva yekutambudzika.
Vafundisi vanozviti vafudzi, asi Shoko hariti mufundisi mufudzi.
Shoko hariti zvakare mufundisi musoro wekereke.
JEREMIA 2:8 ... vafudzi vaindidarikira,
JEREMIA 10:21 Nokuti vafudzi vava vasina njere, havana kubvunza JEHOVA;
JEREMIA 12:10 Vafudzi vazhinji vakaparadza munda wangu wemuzambiringa, vakatsika mugove wangu namakumbo avo, vakaita mugove wangu unodikanwa uve renje risina chinhu.
JEREMIA 22:22 Mhepo ichaparadza vafudzi vako vese
Uku ndiko kukanganisa kunoitwa nevafundisi vazhinji. Zviri pachena kuti simba pamusoro pevanhu rinovan'oresa.
Hutungamiri hwekereke hunoda kutarisiswa zvakare.
VAEFESO 4:11 Zvino wakapa vamwe kuti vave vaapostora, vamwe vaporofita, vamwe vaevangeri, vamwe vafudzi navadzidzisi;
Izwi rekuti mufudzi (pasita) rakataurwa kamwechete muTestamente itsva.
Pachikamu ichi rakataurwa pachinzvimbo chechina kubva pazvinzvimbo zvishanu. Saka havana simba rinobva kumagwaro kuti vatonge kereke. Vakapamba chinzvimbo ichocho.
Ndiani anofanira kutungamira kereke?
St Pauro pakutanga kweTestamente itsva akati vakuru vatinoti maeredha.
MABASA AVAAPOSTORA 20:17 Zvino iye ari paMireto, akatumira Efeso kunodana vakuru vekereke.
MABASA AVAAPOSTORA 20:28 Zvichenjererei imi, neboka rese ramakaitwa vatariri varo noMweya Mutsvene, kuti mufudze kereke yaMwari, yaakatenga neRopa rake.
St Petro akatsinhira chinhu chimwechete ichi takusvika kumagumo kweTestamente Itsva.
1 PETRO 5:1 Naizvozvo ndinoraira vakuru pakati penyu, ini mukuru pamwe navo nechapupu chamadambudziko aKristu, nomugovani navo wokubwinya kuchazoratidzwa ndichiti;
1 PETRO 5:2 Fudzai boka raMwari riri pakati penyu, musingazviiti nokurovererwa, asi nomoyo unoda nokuda kwaMwari, musingazviiti nokuda kwekukarira fuma yakaipa.
JEREMIA 23:2 Naizvozvo zvanzi naJEHOVA, Mwari waIsraeri, pamusoro pavafudzi vanofudza vanhu vangu, makaparadzira makwai angu, mukaadzinga, makasaatarira; tarirai, ndichakurovai nokuda kwezvakaipa zvemabasa enyu ndizvo zvinotaura JEHOVA.
Mwari haafadzwi nevafundisi vanotonga makereke.
Mufundisi ane miganhu yaakaisirwa. Ane masimba aanawo, zvinova zvakanaka, asi zvakare ane kukundikana kwakewo nekutadza kwekusaziva kunonetesa budiriro yevanhu pakusangana nechokwadi. Mamwe makereke anotsudza maeredha, vanofanirwa kubvumirwa namufundisi saka anofanira kuva vari vana hongu kwaari. Asi kunyangwe chikwata chemaeredha ichi chinototongwa namufundisi sezvo makereke akatora tsika yeCatholic yekuva nemunhu mumwechete anotonga.
Zvakaoma kuti tiwane chokwadi cheBhaibheri chakazara mukereke inotongwa nemunhu nekuti chikamu chese ichocho chinorwa neBhaibheri. Chokwadi chizere hachingabudi muchikamu chakavakwa nekukanganisa.
Vatungamiri vekereke vanotonga ndechimwe chiratidzo chenguva yekupedzisira.
Garai muchirangarira kuti Mwari akatii pamusoro pemakereke edu enguva yekereke yechinomwe.
Kudziya zvinoreva kuti unoshandisa chimwe chikamu maGwaro chimwe chikamu hauateveri.
Mumuromo maMwari munobuda Shoko ravo. Saka kushaikwa kwemaGwaro muzvizhinji zviri kuitwa nemakereke zvinoreva kuti hatichararami muShoko remuromo wake. Mwari haatitambiri kana tiri pakati pekutadza nekunatsa. Anoda kuti titsvage dzidziso dzakanaka uye dzinobva muShoko rake nguva dzese. Nemamwe mazwi tinofanira kuva tichitambira kugadziriswa. Tinofanira kudzidzisika. Tinofanira kuda kudzidziswa.
ZVAKAZARURWA 3:17 Nokuti unoti ndakafuma, ndakafumiswa, hadishaiwi chinhu; usingazivi, kuti ndiwe unovurombo nenhamo, uri murombo nebofu usina chokufuka.
Hakuna “chiro” chiri rima. Rima kusavapo kwechiedza. Shoko raMwari ndiro chiedza. Kuva usingararame kupfurikidza maGwaro zvinongoreva kuti hauna chiedza. Zvinotiisa murima. Wese ari murima ibofu sezvo asingakwanisi kuona kuti chii chiri kuitika. Kushaikwa kwehumbowo hwemaGwaro mukereke medu kunoreva kuti tiri murwendo rwerima, tichitsvaka musuwo unova Jesu chiedza chedu.
GENESISI 19:10 Asi varume vakatambanudza maoko avo, vakakwevera Roti mumba mavakanga vari, vakapfiga gonhi.
11 Vakapofomadza vakanga vari pamusuo, vaduku navakuru; vakazvinetsa vachitsvaka musuo.
Zvimwechete zvakaitika mumazuva aRoti. Varume vaiita ngochani muSodhoma vakatsvaka murima asi musuo waive wavharwa.
RUKA 17:28 Sezvazvakanga zvakaitawo mazuva aRoti; vaidya, nokunwa, nokutenga, nokutengesa, nokusima nokuvaka;
Saka zvese pazvaiita kunge zvese zvakanaka Mwari akabva avhara musiwo.
RUKA 17:26 Sezvazvakanga zvakaita mazuva aNoa, ndizvo zvazvichaitawo kumazuva eMwanakomana wemunhu.
27 Vaidya nokunwa nokuwana, nokuwaniswa, kusvikira zuva rakapinda Noa muareka, mvura zhinji ikasvika, ikaparadza vese.
Zvese zvaiita sezvakanaka asi zvakare Mwari akabva akavhara musuo.
GENESISI 7:16 Zvose, zvakapinda, zvakapinda zvichiti mukono nehadzi, zvese zvipenyu sezvaakarairwa naMwari, JEHOVA akamuzaririra mukati.
Paive nemusuo mumwe waipinda muareka Mwari akauvhara.
Jesu ndiye musuo wekuenda kudenga.
JOHANE 10:7 Zvino Jesu akati kwavari zve: zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri ndini mukova wamakwai.
Pamazuva ose aNoa neaRoti mukova wakapfigwa.
Saka chiratidzo chikuru munguva yekereke yechinomwe ndeapo Mwari vachapfiga mukova wekunzwisisa maGwaro.
Makereke haachakwanisi kutsanangura zvinhu zvizhinji zviri muBhaibheri uyezve havachakwanisi kutsigira dzidziso dzavo neBhaibheri.
Tinoziva sei kuti mukova wekuti tisvike pachokwadi wapfigwa mumazuva ekupedzisira.
RUKA 13:24 Akati kwavari: Irwai kupinda nesuo rakamanikana; nokuti vazhinji, ndinoti kwamuri, vachatsvaka kupinda, asi havangagoni.
25 panguva iyo kana mwene weimba asimuka, azarira suvo, imi makatanga kumira kunze, mukagogodza pasuo, muchiti: Ishe! Tizarurirei! Iye akapindura , achiti kwamuri: Handikuzivii imi kwamakabva.
26 Zvino muchatanga kuti: taidya taimwa pamberi penyu, uye maidzidzisa panzira dzemumisha yedu. (kunamata nekurumbidza kukuru)
27 Asi iye uchati: Ndinokuvudzai: Handizivi kwamakabva; ibvai kwandiri, imi mose vaiti vezvasakarurama.(kuita zvinhu zvavanoziva kuti zvakashata)
28 Apo pachava nokuchema nokugeda-geda kwameno, kana muchivona Aburahamu naIsaca naJacobo navaporofita vose vari muvushe hwaMwari, asi imi mabudiswa kunze.(mukunoTambudzika kukuru)
ZVAKAZARURWA 3:14 Nyorera mutumwa wekereke iri paRaodhikia uti.
ZVAKAZARURWA 3:20 Tarira, ndimire pamukova; ndichigogodza; kana munhu akanzwa izwi rangu, akazarura mukova ndichapinda kwaari, ndicharaira naye naiye ucharaira neni.
Vhesi iri rinotaura pachena kuti Jesu akamira kunze kwemukova wekereke. Ari kugogodza pamusuo wakapfigwa. Saka musuo wakapfigwa asi ari kuedza kupinda mumunhu umwe neumwe mukereke kuti amuteerere nekuti ndiye Shoko, Bhaibheri.
RUKA 18:8 Ndinoti kwamuri: Uchakurumidza kuvaruramisira. Asi kunyange zvakadaro Mwanakomana wemunhu kana achisvika, uchawana kutenda panyika here?
Vhesi iri rinotaura kuti kuchave nevanotenda vashoma mumazuva ekupedzisira.
VAROMA 10:17 Naizvozvo kutenda kunouya nokunzwa, nokunzwa kunouya neShoko raMwari.
Kutenda kwako kwakasimba zvichienderana nehuwandu hwemaGwaro aunotenda maari.
Mavhesi maviri aya anoreva kuti vanhu vashoma ndivo vachakwanisa kutsigira kutenda kwavo neBhaibheri.
Iva nechokwadi kuti uri umwechete wavo, kunyangwe ruzhinji mukereke rwusingabvumirani newe. Hamuna kupona muvazhinji. Akatora mumwechete mumunda neumwechete aikuya zviyo.
Mvura yaNoa isati yauya munhu mumwechete chete Inoki ndiye akakwira kudenga asina kufa. Nhasi uno Mwenga anofanira kugadzirira kukwira kudenga nguva yeKutambudzika kukuru isati yasvika. Saka zvinoreva kuti Mwenga achange achirarama haazoone rufu. Kana Mvura yaNoa iri muenzaniso wenguva yedu yatiri kurarama nhasi, saka huwandu hwevanhu vachakunda hunenge husina kukura.
Saka chimwe chiratidzo chemazuva ekupedzisira ndechekuti vanhu vashomanana ndivo vanoda kutevera nekudzokera kumaGwaro kunonzvera zvese zvavanotenda mazviri.
Vanhu vashomanana ndivo vanokoshesa Bhaibheri zvekuriverenga nekurinzvera zvakadzama. Nei? Nekuti pavanoita izvi vanoona kuti vazhinji havadi.
Hunhu hwenguva yekupedzisira uhwu hwekushaiwa hanya hunoworesa moyo yavo voshaiwawo shungu dzekudzidza zvakare.
Saka tinotenda kutongwa nezvinotiwira kwete kutendera Mweya Mutsvene waMwari kuti utitonge.
MATEO 15:8 Vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo asi moyo yavo iri kure neni.
9 Asi vanondinamata pasina vachidzidzisa dzidziso iri mirairo yevanhu.